Start Bird Watching From Your Backyard│Sports News Headlines Global Articles WebSite.WS | Gvmg - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
Posted Articles Title : Start Bird Watching From Your Backyard
■Link To This Post (HTML code) : Start Bird Watching From Your Backyard
■Trackback URL : Start Bird Watching From Your Backyard
ဂေါက်သီးအခြေခံ – အစိမ်းရောင်အကြောင်း
ခုနစ်ကြိမ်မြောက်ချန်ပီယံတစ် ဦး ကောင်းကောင်းပေးဆောင်အခွန်ဆက်
Tips To Help You Learn How To Ski
Fly ငါးဖမ်းကိရိယာများ: The Basic Choices in Waders
အဆိုပါအဓိပ္ပာယ်နှင့် Nasty မြောက်ပိုင်းပိုက်
မြစ်များနှင့်ရေကန်များပေါ်တွင်ပျံသန်းခြင်းကိုငါးဖမ်းခြင်းမှာသဘာဝအတိုင်းသဘာ ၀ ကျသောအချိန်အဖြစ်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်. မြောက်ပိုင်းပိုက်ကိုရှာဖွေပါ, သို့သော်, ငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောအခွင့်မရှိဘဲ၊. The Mean and Nasty Northern Pike ပိုက်သည်နတ်ဆိုးစွဲသူတစ် ဦး ၏တီထွင်မှုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်. ဒါအကြီးကြီးပဲ, အစာရှောင်, ဆိုလိုတာက. ဒါဟာပိုက်ကိုရုပ်ဆိုးပေမယ့်ဘာမှအဖြစ်ဖော်ပြရန်သောရှားပါးလူတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်. ကျနော်တို့စကားပြောနေကြတယ်အကြိမ်အနည်းငယ်ရုပ်ဆိုးထက်ပိုရုပ်ဆိုးသောတုတ်နှင့်အတူထိခိုက်နေကြသည်! ကိုယ့်ကိစ္စရပ်များကိုထိပ်တန်းရန်, ဒီနတ်ဆိုးမှာပေါက်ဖွားလာတာကသွားတွေရှိတယ်။ မိကျောင်းကိုတွန့်ဆုတ်စေတယ်. ကျနော်တို့အကြီးမားဆုံးအကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်, ပတ်ပတ်လည်အဆိုးဆုံးငါး. ပါးစပ်အနေဖြင့်ပြုမူသောဝက်ဝံထောင်ချောက်ကအကြံပြုသည်အတိုင်းမြောက်ပိုင်းပိုက်သည်အသားစား၏. အမှန်ကတော့, ငါတို့ကသမုဒ္ဒရာထဲကငါးမန်းတွေရဲ့တူညီတဲ့အကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ကမကြာခဏရယ်စရာဝံပုလွေလို့ပြောကြတယ်. ရေငွေ့ငါးမျှားခြင်းမှဂိမ်းကစားငါးများမှဖားများအစာစားပါလိမ့်မည်, သငျသညျစိတ်ကူးရ. အဲဒါကိုရနိုင်မယ်ဆိုရင်, ဒီငါးစာကိုစဉ်းစားပါ. ဟုတ်တယ်, အဆိုပါပိုက်သည်အခြား pikes ကိုစားလိမ့်မည်. မြောက်ပိုင်းပိုက်သည်အလွန်ကြီးထွားနိုင်သည်. ဒါဟာကောလာဟလတကယ်တော့ထံမှခွဲခြားရန်ခက်ခဲသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကအရှည်သုံးလေးပေအထိပြေးနိုင်ပါတယ်. အများကြီးပိုကြီးတဲ့ပိုက်တောင်၏ကောလာဟလများအများကြီး Yeti ကဲ့သို့များစွာသော, ဒါပေမဲ့သူတို့အမှန်တကယ်တည်ရှိနည်းနည်းသက်သေအထောက်အထားများရှိခဲ့သည်. တိုင်းဖမ်းမိအကြီးဆုံးတ ဦး တည်းဖြစ်ခဲ့သည် 34 ကနေဒါ Nejanilini ရေကန်၌ပေါင်သားရဲ. 42 ပေါင်ပေါင်အစီရင်ခံခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်မှတ်တမ်းတင်မဟုတ်ပါဘူး. မည်သည့်အသားစားနှင့်ဝသကဲ့သို့, မြောက်ပိုင်းပိုက်သည်နောက်ယောင်ခံခြင်းဖြစ်သည်. Lilly ကဲ့သို့သောဒေသများရှိကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်စောင့်စားခြင်းဖြင့်၎င်းသည်အစာရှာလေ့ရှိသည်, ပေါင်းပင်, သို့မဟုတ်ဘယ်မှာကမ်းခြေအသီးအရွက်များရေထဲသို့ထွက်ပြေး. ဒီဟာနေ့ခင်းဘက်မုဆိုးပါ. လျင်မြန်စွာနဲ့ရက်စက်စွာရိုက်ခတ်, ဒါကြောင့်သင်တစ် ဦး တည်းချိတ်မိလျှင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်တုံ့ပြန်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်. မြောက်အမေရိကတိုက်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အလွန်ချိုသောခန္ဓာကိုယ်ကိုပေးသောခဲဖွယ်စားဖွယ်များမဟုတ်ပါ. ဒါကဆိုပါတယ်ခံရ, ဆိုက်ဘေးရီးယားကဲ့သို့သောဒေသများရှိငလျင်ကြီးများသည်ပုံမှန်အစားအစာဖြစ်သည်. တကယ်တော့, အနည်းငယ်သိရသည့်အချက်မှာဆိုက်ဘေးရီးယားရှိငါးမျှားခြင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. ဒါပေါ့, ဆိုက်ဘေးရီးယားသည်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၌လျှို့ဝှက်ချက်များစွာရှိသည်, ကမ္ဘာပေါ်ရှိနောက်ဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိသောငါးဖမ်းပရဒိသုတစ်ခုဖြစ်သည်. အဆိုပါအဓိပ္ပာယ်နှင့် Nasty မြောက်ပိုင်းပိုက်
Karts သွားပါ – Exciting At Any Age!
Are you ready to discoverathrilling recreational activity? Racing or off road go karts could be the ultimate in excitement! The thrill of skidding sharply aroundablind corner in your go kart is an experience that is hard to surpass. Racing down the track in one of your speedy go karts, maneuvering around curves and slower gokart drivers, is fun at its best. Pressing down hard on the accelerator as you pass by slower drivers is about as adrenaline-pumping as it gets. And with gokarting for every level anyone can experience the fun and heart-pounding excitement of go karting. The smell of the dirt track and the distinct aroma of the gas and oil burning in the gocart engine is enough to excite any enthusiast, even when watching from the stands. If you have ever watched an Indy Car or Formula One race in person or on TV you know how exciting it can be. But imagine climbing into one of those off road or racing gokarts yourself. Starting out slow, taking out to the track, the anticipation is almost unbearable. ထိုအခါမူကား, once on the track, you press the accelerator on your go cart to the floor, feeling an immediate thrust forward, and your adrenaline pumping just as fast. Whatathrill. Go karts cannot be beat. Go karts are how you can experience the thrill of Formula One racing without the danger. At least with the beginner go karts. And you can find those just about anywhere, at family amusement parks, fun centers and other recreational areas where you live. And if you are really serious, it isagood way to get started towardacareer in professional racing. Once you master driving go karts it is time to take the next step into the arena of professional racing. But if you are not quite so brave remaining inago kart can still be exciting. Go karts are geared toward beginners in either off road or paved track racing. Beginner go karts are easy to drive and control. And if you do lose control there are usually not serious consequences to deal with afterward. မဟုတ်ဘူး, it is just plain fun racing go karts. Go karting isasimplified version of Indy Car or Formula One racing. But like anything else there are different levels that you can become involved in. From total beginners to professional go kart racing. From the least experienced drivers to ones that are training to become professional drivers. You can choose your own competition. No need to get involved over your head. The main objective is to have fun. And once you get into your own go kart, no matter what level you are competing in, the fun just never ends. Once you get addicted to go karting there is no limit as to what you can do. You can purchaseabrand new gokart ready for racing, or you can buy inexpensive kits and build your own go carts. Installing rack and pinion steering to changing tires will become easy over time. Or how about the installation ofabrand new engine designed for improving the speed of go karts? Maybe you will be afterabrand new frame that will be the envy of all around. Perhaps you will want to get into electric gokarts instead of gas powered go karts. The way gas prices are climbing these days that might beagood idea. But the bottom line is this: speed is where the excitement comes in. And these go karts can reach speeds up to 90 MPH or more. That is fast. But once again, there is no need to start getting nervous just yet. There are opportunities for thrills at every level. You do not need to go 80 MPH to experienceathrilling ride. So if you have ever thought about getting involved with go karts it is never too late and you are never too old. Go out and experience the thrill of go karting now. Karts သွားပါ – Exciting At Any Age!
လူတိုင်းလိုလိုသည်လူကြိုက်များသောကိုယ်ခံပညာကိုသိသည်, ထိုကဲ့သို့သောကရာတေးအဖြစ်, Tae Kwon Do, Kung Fu နှင့် Tai Chi…လူအချို့ကစာသင်ခန်းတစ်ခုကိုကြိုးစားဖို့တောင်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်. Bt သင်အစဉ်အဆက်ကတကယ်တော့ပွုပါပွီ? သင်အကြောင်းပြချက်လိုအပ်ပါသလား? လူတိုင်းကတစ်ချိန်ချိန်မှာကိုယ်ခံပညာကိုသင်ယူဖို့စဉ်းစားနေကြပြီ. ဒီတစ်ခါလည်းပုံသဏ္anotherာန်၌နေရန်အခြားနည်းလမ်းအဖြစ်. ကျောင်းတွင်အနိုင်ကျင့်ခြင်းမှမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်. ရာဂဏန်းရှိတယ်, လျှင်မထောင်ပေါင်းများစွာ, လူတွေအနုပညာတက်ဖို့ရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပေါ့, ဒါပေမယ့်ငါအနည်းဆုံးကိုယ်ခံပညာကိုကြိုးစားရန်အရေးအပါဆုံးအကြောင်းပြချက်များမှာငါခံစားမိသောအရာကိုဖော်ပြရန်တစ်စက္ကန့်ကိုယူချင်တယ်. ဒီတစ်ခါလည်းသင်ကိုယ်တိုင်အဘို့ပါပဲ, ဒီတစ်ခါလည်းကသင်၏သားသမီးတို့အဘို့ပါပဲ…ဘာပဲအကြောင်းပြချက်, အားလုံးကိုယ်ခံပညာသင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသောထူးခြားသောအသိပညာနှင့်စည်းကမ်း၏စည်းစိမ်ကိုဆံ့. ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်သည်မှာဤဆောင်းပါးသည်ကိုယ်ခံပညာနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုကြည့်ရန်သင်၏ထိုင်ခုံမှကျောင်းသို့တက်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုသိုင်းပညာကိုသင်လေ့ကျင့်သည်, တိုးတက်မှုရှိရင်သင်သတိထားမိမှာပါ, ထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့ကိုယ်ကအဖြစ်, ချိန်ခွင်လျှာ, အသိအမြင်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, နှင့်အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ. ကိုယ်ခံပညာသည်ဤစွမ်းရည်များကိုမည်သို့ပေါင်းစပ်။ ပြိုင်ပွဲများတွင်အောင်မြင်နိုင်မည်ကိုသင်ကြားပေးလိမ့်မည်, မြင့်မားသောခါးပတ်ကိုမှီ, ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်လိုအပ်ပါကမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခြင်း. သင်လုပ်နိုင်လေ, သင်ပိုမိုယုံကြည်မှုဖြစ်လိမ့်မည်. မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခြင်းကိုယ်ခံပညာလေ့လာသင်ယူရန်အသုံးအများဆုံးအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာမိမိကိုယ်ကိုမည်သို့ကာကွယ်ရမည်ကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်. ကျောင်းအတော်များများသည်အတန်းချိန်ကိုမြှုပ်နှံခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခြင်းနည်းစနစ်များအတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်သောစီစဉ်ထားသည့်အတန်းတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းနိုင်သည်. ဒါ့အပြင်, MA စတိုင် (သို့) ကျောင်းပေါ်မူတည်သည်, မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခြင်းသည်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်, အရာ၌စိတ်ဝင်စားသောသူတို့အားအကျိုးရှိသောနိုင်ပါတယ် “သက်ဆိုင်သောအနုပညာ” (နေ့စဉ်ဘဝမှာသင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အနုပညာ) ဆန့်ကျင်အဖြစ် “ရိုးရာအနုပညာ”. ကိုယ်ပိုင်စည်းကမ်း Webster သည်မိမိကိုယ်ကိုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းကို 'တိုးတက်မှုအတွက်မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမခြင်းသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း' အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။. ဒါကြောင့်အထက်တန်းကျောင်းအဖွဲ့ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီသတ်မှတ်ရက်တွေ့ဆုံရန်ကြိုးစားနေခြင်းရှိမရှိ, သငျသညျကိုယ်ခံပညာဝိဇ္ဇာအောင်မြင်ရန်လိုအပ်သောအာရုံကိုလေ့လာပြီးတာနဲ့သင်၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးလျှောက်ထားနိုင်သည်. အောင်မြင်မှုသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်သည်, သင်စိတ်ထဲထည့်ထားသည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုအောင်မြင်ရန်လိုအပ်သည့်မိမိကိုယ်ကိုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရန်သင်ကြားပေးလိမ့်မည်. ညှိနှိုင်းခြင်းကိုယ်ခံပညာသည်လက်များစွာလိုအပ်သည်, ခြေထောက်, မျက်လုံး, နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်း, ဒါပေမယ့်ဒီအရာအားလုံးကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်. သင်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှိနှိုင်းမထားတဲ့လူတစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်, ကိုယ်ခံပညာသင်ကြားခြင်းကထိုအရည်အချင်းများကိုတိုးတက်အောင်ကူညီလိမ့်မည်. သင့်ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည်သင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်! သင်ကသဘာဝအားကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ရင်တောင်, တ ဦး တည်းခြေလျင်ရပ်နေသည်, အခြားနှင့်အတူကန်နေစဉ်, နှင့်သင်၏လက်ဖြင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းအတော်လေးခက်ခဲသည်နှင့်ညှိနှိုင်းပါဝငျသညျ. ကြံ့ခိုင်ရေးကိုယ်ခံပညာသည်အချို့သောစတိုင်များသည်ကြံ့ခိုင်မှုအပေါ်အခြေခံသောကြောင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခြင်းကိုသာအာရုံစိုက်ရန်မလိုအပ်ပါ. Tae Bo နှင့် Tai Chi တို့မှာဥပမာနှစ်ခုဖြစ်သည်. သို့သော်, တိုက်ပွဲများအတွက်အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူသူတို့အား & ကိုယ်ခံပညာကိုယ်ခံပညာသည်မိမိကြံ့ခိုင်မှုအဆင့်ကိုသိသိသာသာများပြားလာသည်နှင့်အမျှလေ့ကျင့်မှုသည်ကြွက်သားအုပ်စုအမျိုးမျိုးကိုဖွံ့ဖြိုးစေသည်သာမက, ဒါပေမယ့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာဟန်ချက်ညီ. တ ဦး တည်းရဲ့ကြံ့ခိုင်ရေး၏အဆင့်ကိုတ ဦး တည်းရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်အဖြစ်ပွဲစဉ်အနိုင်ရအတွက်နည်းတူအရေးကြီးသောနိုင်ပါတယ်. မိသားစုပျော်ရွှင်မှုဤသည်မှာသင်၏မိသားစုနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းလူအများစုမသိပါ! အချို့သောကိုယ်ခံပညာကျောင်းများသည်မိသားစုများကိုအတူတကွလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးအခြားသူများကိုမူအသက်အရွယ်အလိုက်အတန်းခွဲခြားသည်. မည်သို့ပင်အတန်းသီးခြားစီနေကြသည်, မိသားစုများသည်အတူတကွလုပ်ဆောင်ရသောအချိန်ကိုပျော်မွေ့ကြသည်. မိသားစုတစ်စုလုံးကိုရာထူးအမျိုးမျိုးနှင့်အနက်ရောင်ခါးပတ်များအတူတကွစမ်းသပ်ခြင်းသည်မကြားဖူးပါ. လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန် – ကိုယ်ခံပညာသည်လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်သည်… စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအနုပညာကျောင်းအတော်များများသည်သူတို့၏အတန်းများကိုအသက်သုံးအုပ်စုခွဲထားကြသည်: ကလေးတွေ ‘ များသောအားဖြင့်အကြောင်းကိုကနေအထိ5ရန် 11 နှစ်ပေါင်းများစွာ, ဆယ်ကျော်သက် ‘ 12 အကြောင်း 16 ဒါမှမဟုတ် 17, နှင့်လူကြီးများ ‘ များသောအားဖြင့်စတင်သည် 18, သို့သော်အချို့ကျောင်းများတွင်လိုအပ်သောအခါခြွင်းချက်များပြုလုပ်သည်. အချို့သောကျောင်းများသည်နဂါးနဂါးငယ်များလည်းပါ ၀ င်သည်’ အစီအစဉ်ကို ဦး တည်ရည်ရွယ်4‘6နှစ်အရွယ်လူအစုအဝေး. ထို့နောက်အသက်အရွယ်အုပ်စုများသည်တန်းတူညီမျှသောစွမ်းရည်နှင့်အသက်အရွယ်တူသူများနှင့်သင်ကြားရန်ခွင့်ပြုထားသောခါးပတ်အဆင့်များထဲသို့ကျသည်. တစ်ခါတစ်ရံကိုယ်ခံပညာအတူတကွစတင်လေ့လာသူများသည်ချစ်ကြည်ရေးနှောင်ကြိုးကိုဖော်ဆောင်ကြပြီးသူတို့၏ခက်ခဲသောအချိန်များအတွင်းအချင်းချင်းတွန်းအားပေးသောကြောင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်သူတို့၏အနက်ရောင်ခါးပတ်များကိုပင်ရရှိနိုင်ပါသည်။. ထောင်ပေါင်းများစွာသောကိုယ်ခံပညာစတိုင်တွေရှိတယ်ဆိုတာသတိရပါ. အခွင့်အလမ်းများသင့်ရဲ့အကြောင်းပြချက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားရန်အဘို့အဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေပါစေသင်တို့အဘို့အစတိုင်တစ်ခုနှင့်ကျောင်းပြီးပြည့်စုံသောရှိပါသည်. သင်အနီးအနားရှိတ ဦး တည်းကိုရှာဖွေစိတ်ဝင်စားလျှင်, http သို့သွားသည်://www.experiencemartialarts.com. သင့်ဒေသရှိသိုင်းပညာနှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ထပ်အချက်အလက်များအပြင်ကျောင်းများစာရင်းကိုလည်းသင်တွေ့လိမ့်မည်. ကိုယ်ခံပညာကိုကြိုးစားသင်ရသည့်အကြောင်းရင်းများ
ကိုယ်ခံပညာကိုစစ်ပွဲအတွင်းအသုံး ၀ င်သောမည်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုမဆိုဟုသတ်မှတ်သည်. စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနည်းလမ်းများ၏အဓိပ္ပါယ် “စစ်ရေး။” အစဉ်အလာအတိုင်း, တစ် ဦး ကိုယ်ခံပညာအနုပညာစစ်တပ်အနုပညာဖြစ်ပါတယ်. ခေတ်သစ်တိုက်ခိုက်ရေးစနစ်များကိုဆွေးနွေးသည့်အခါသင်၏ခေါင်းထဲသို့များသောအားဖြင့် ဦး ဆုံးပေါ်ပေါက်လာသည့်အရာများသည်ခုန်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်သည်, ကန်, လာကြတယ်, ပိတ်ဆို့ခြင်း, တံတောင်ဆစ်လွှဲပြောင်း, လိမ်လည်ပင်း, ပစ်, နှင့်လက်နက်တိုက်ခိုက်ရေး. ဒါပေမယ့်လည်းမြင်းစီးသူရဲ, လှံပစ်, မြားပစ်, လှံများတိုက်ခြင်း, halberd တိုက်ပွဲများ, နပန်း, ဓားတိုက်ခိုက်နေ, ရိုင်ဖယ်, သေနတ်, နှင့်ပစ္စတိုပစ်ခတ်မှု, ဖြိုဖျက်, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, နှင့်စစ်တိုက်မဟာဗျူဟာအားလုံးကိုကိုယ်ခံပညာ၏လယ်ပြင်အဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါသည်. စစ်တိုက်ရာတွင်စစ်သားတစ် ဦး လုပ်နိုင်သမျှသည်ကိုယ်ခံပညာဖြစ်သည်. ကိုယ်ခံပညာအားဖြင့်အများအားဖြင့်၎င်းသည်အိုင်ကီဒိုဟုဆိုလိုသည်, arnis, လက်ဝှေ့သမား, capoeria, Chow gar, အဲဒါပျားရည်ပဲ, hapkido, လှိုင်, hun gar, jeet kune လုပ်ပါ, jow gar, ဂျူဒို, ကျောက်တံတား, ကရာတေး, kempo, ကန်ဘော, လိုအပ်ချက်များအစာအိမ်, ကွန်ဖူး, pa Kua, penjak silat, mantis ဆုတောင်း, အရသာ, shaolin, တကုန်း, tai chi, ချီစက်ဖြူ, ving tsun, ဝူရှု့နှင့်ပိုပြီး! သင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းစာရင်းသည်အတော်လေးရှည်လျားပြီး၊ တိုက်ခိုက်ရေးအနုပညာစနစ်မည်မျှရှိကြောင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းမည်မျှဖော်ထုတ်နိုင်ကြောင်းအမှန်တကယ်အလွန်ကတိပေးသည်။. သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးပုံစံကတော့သင်ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ထားသောထုတ်ကုန်ကိုအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးသည်, နှင့်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်အထိတက်ယူရန်သင့်အားတိုးတက်လာသည်. ကြောင်းအပြည့်အဝအဆက်အသွယ်လေ့ကျင့်ရေးကိုဆိုလိုသည်ဆိုပါက, ထို့နောက်သင့်အားပေးသောစတိုင်လ်များလိုအပ်သည်. မကြာခဏကိုယ်ခံပညာကျောင်းတွင် 'ဤပုံစံသည်အကောင်းဆုံးသောစနစ်ဖြစ်ပြီးအခြားသူများကိုအနိုင်ကျင့်ရန်ဖန်တီးထားသည်' ဟုသွန်သင်သည်. စစ်အုပ်စုအနုပညာရှင်တိုင်းဟာသူတို့ရဲ့စတိုင်ဟာအကောင်းဆုံးလို့ရှုမြင်ကြလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့သူတို့ပြောနေတာက 'ဒါကငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးပုံစံဖြစ်တယ်၊ ငါ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုက်ညီပြီးသင်ကြားရေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုငါနှစ်သက်တယ်'. ကိုယ်ခံပညာတွင်ဆက်လက်ဟာသတစ်ခုရှိသည်, တစ်စုံတစ် ဦး ကသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးစတိုင်လို့ပြောတဲ့အခါအခြေခံအားဖြင့်ပြောတာပါ, သူတို့တကယ်ဆိုလိုတာက “ငါက X လေ့လာတယ်”. ပွင့်လင်းသောစိတ်နှင့်ပွင့်လင်းမျက်စိရှိသည်, သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောစတိုင်သို့မဟုတ်စတိုင်လ်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်. အနုပညာပြောင်းလဲခြင်းဤသမိုင်းစဉ်အတွင်းနှင့်ကိုယ်ခံပညာနှင့်လူသား၏တိုက်ခိုက်ရေးစနစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏လေ့ကျင့်ရေးကိရိယာများသည်ဤတိုက်ပွဲစနစ်များကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်ပြည့်စုံစေရန်အထောက်အကူပြုခဲ့သည်။. ကိုယ်ခံပညာအားလုံးသည်စက်ကိရိယာများကစားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်လက်နက်ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ပြောင်းလဲသွားသည်, Dojo ဖျာ, ကျိုးပဲ့ဘုတ်အဖွဲ့သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဝတ်ဆင်သည့်ယူနီဖောင်းပင် – ဤအရာအလုံးစုံ paraphanialia သူတို့ရဲ့စနစ်များနှင့်စတိုင်သို့ကိုယ်ခံပညာအနု. ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခံပညာအသစ်များကိုပုံဖော်ရာတွင်အဓိကကစားသမားများသည်ခေတ်ပြိုင်မဟုတ်သောသစ်သားအတုဖြစ်လိမ့်မည်, ving tsun ကွင်း, သံထန်းဆီမွှေးများနှင့်ပုံစံနှင့်ကတ်အသုံးပြုသည့်စနစ်ပင်လျှင်ကိုယ်ခံပညာကို၎င်းတို့၏လက်ရှိပုံစံသို့တီထွင်ခဲ့သည်. ဒီနေ့ခေတ်မှာတောင်မှခေတ်မီလေ့ကျင့်ရေးကိရိယာများသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်ခံပညာသည် Wavemaster ကဲ့သို့သောလေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းအသစ်များဖြင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်, အဆိုပါ BOB လေ့ကျင့်ရေးအတု, အဆိုပါအာရုံစူးစိုက်မာစတာ. အားလုံးဘုံစိတ်ကူးနှင့်အတူ, ကောင်းစွာ rounded တိုက်ခိုက်ရေးစနစ်ဖန်တီးရန်. အကောင်းဆုံးသောကိုယ်ခံပညာဆိုင်ရာတစ်ကိုယ်တော်လေ့ကျင့်ရေးကိရိယာသည်နောက်ခံစံနမူနာကောင်းများပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ပုံမှန်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့်ခိုင်လုံသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးချခြင်းကို အခြေခံ၍ အားလုံးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။. အတွေးအခေါ်နှင့်သီအိုရီသည်လူသား၏တိုက်ခိုက်ရေးနည်းပညာ၏သမိုင်းကြောင်းအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်လမ်းပေါ်လျှောက်လွှာကိုပေးရမည်. Martialarm Combat art Kung Fu သည်တိုက်ခိုက်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးနှစ်ခုလုံးတွင်ပြိုင်ဘက်ကင်းသောထိရောက်သည့်သိပ္ပံကိုယ်ထည်လက်နက်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောစုစုပေါင်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။. Formula Fighting သည်ပြိုင်ဘက်ကင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းအတွက်ခွင့်ပြုသည် – သူတို့တုံ့ပြန်မှုရွှေ့သည်အထိသမားရိုးကျ - စောင့်ဆိုင်းထက်အများကြီးပိုမြန်တိုက်ခိုက်ရေးစနစ်’ ကာကွယ်ရေး. စနစ်တကျတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုမှန်ကန်စွာအသုံးချခြင်းသည်လက်ရှိတိုက်ခိုက်ရေးစနစ်များ၏နည်းပညာထက်သာလွန်နေပြီး၊. # ဒီစနစ်ထဲမှာပါဝင်တယ်: # စမတ်အမှားစိတ်ကူးများနှင့်ရွေးချယ်ပစ်မှတ် # ဒီဂရီမျဉ်းအချက်များနှင့်ပြည်တွင်းရေးထိတ်လန့်သပိတ်မှောက် # ဘက်စုံသုံးစစ်ရေးအသုံးချမှုများ # Broken ရစ်သမ်သို့မဟုတ် plyometric applications များ # Chi-Sau နှင့်အလိုအလျောက် reflex စနစ်များ # လျှို့ဝှက်လက်နက်များနှင့် clasifications # တ ဦး တည်းလက်မောင်းတိုက်ခိုက်ရေးနည်းဗျူဟာ # မီးသတ်နှင့်မေ့လျော့ဖော်မြူလာ # ခြိုးဖောကျခွငျး # Delivery ဇုန် # အထူးသဖြင့်ကိုယ်ခံပညာခေတ်သစ်စစ်ဆင်ရေးတရုတ်စစ်ဆင်ရေးစနစ်များသည်အထူးသဖြင့်သူတို့၏လက်နည်းစနစ်အမျိုးမျိုးကြောင့်ကျော်ကြားသည်. Kung-Fu စတိုင်လ်အများစုသည်လက်နှင့်လက်မောင်းလက်နက်အမျိုးမျိုးရှိသည် (ထိုကဲ့သို့သောခြေသည်းအဖြစ်, ချစ်သူ, စွန်ပလွံများ, ချစ်သူ, လာကြတယ်, နောက်ကြောင်းပြန်, မင်္ဂလာပါ, လက်ဖျံ, တံတောင်ဆစ်နှင့်ပခုံးသပိတ်) သူတို့ရဲ့ဂျပန်ထက်, အိုကီနာဝါနှင့်ကိုရီးယားကောင်တာ?အစိတ်အပိုင်းများ. အမှန်တကယ်အသုံးပြုသောသဘာဝကိုယ်ခန္ဓာလက်နက်အရေအတွက်အပြင်ထို့အပြင်အမျိုးမျိုးသောအသုံးချမှုများရှိသည်?Kung Fu စတိုင်များ၏ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် Hard သို့မဟုတ်ပြည်တွင်း / ပြင်ပစတိုင်များအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုကြောင့် ations. ဒီနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်၌, ခြေထောက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မိုးသည်းထန်စွာအမြောက်တပ်အဖြစ်အသုံးပြုကြသည်, လက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခြေလျင်များမှာနေစဉ်. စစ်တပ် en?ကောင်တာ, ပထမဂြိုဟ်တုနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ပြိုင်ဘက်များ၏တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ရန်သူကိုပျော့ပျောင်းစေရန်နှင့်အကွာအဝေးအဝေးမှကိုယ်ပျောက်အမြောက်တပ်ကိုအသုံးပြုရန်နှင့်ခြေလျင်တပ်များသည်အငြင်းပွားနေသောနယ်မြေကိုသိမ်းယူရန်အတွက်ရှေ့သို့ရွေ့လျားနိုင်သောအဖုံးများကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။. အမြောက်တပ်များ၏အကျိုးအတွက်မရှိဘဲ, အဆိုပါခြေလျင်မိုးသည်းထန်စွာပေါ့ပေါ့ယူလိမ့်မယ်?ဆက်ဆံရေး. သို့သော်, ဘာမျှမနှင့်အတူအမြောက်တပ်ပိုင်နက်သိမ်းယူခြင်းနှင့်ကိုင်ထားလို့မရပါဘူး – အဓိက bom?Bardment ရန်သူနှင်ထုတ်လိမ့်မည်. ဒါကြောင့်လက်နှင့်ခြေထောက်နည်းစနစ်များနှင့်အတူဖြစ်ပါတယ် – ပြိုင်ဘက်ကိုပျော့ပြောင်းစေရန်နှင့်လက်နှင့်လက်မောင်းနည်းစနစ်များဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုအပြီးသတ်နိုင်သည့်အထိကွာဟမှုကိုပေါင်းကူးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ခြေထောက်များကိုမကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိပြီးလက်၊ လက်နှင့်ခြေထောက်နည်းစနစ်များကိုသင့်လျော်စွာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်းတို့သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အောင်မြင်မှုရရန်. ကွဲပြားသောထောင့်အမျိုးမျိုးမှလည်းကောင်း၊ အမျိုးမျိုးသောပစ်မှတ်အဆင့်များမှလက်နှင့်ခြေထောက်များကိုတိုက်ခိုက်သောပေါင်းစပ်ချဉ်းကပ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်. အဆိုပါအယူအဆကွဲပြားခြားနားသောထောင့်ကနေနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်မှာတစ် ဦး ပြိုင်ဘက်ရဲ့ပစ်မှတ်ဇုန်သို့ရွေ့လျားထိုးစစ်နည်းစနစ်များစီးဆင်းမှုကိုထိန်းသိမ်းသည်, သူ့ကို / သူမ၏လုံးဝ disorientate နိုင်ရန်အတွက်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအနေအထားသည်အကြီးအကျယ်ကျူးလွန်သောနည်းစနစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုအပေါ်မှီခိုခြင်းအားဖြင့်နည်းဗျူဟာသာလွန်သည်. မြန်နှုန်းများအတွက် Martialarm သိပ္ပံနည်းကျသင်တန်း #1. လှုပ်ရှားမှု၏အစက. သင်သည်အပြုသဘောဆောင်သောပို့ဆောင်ခြင်းဇုန်တွင်စတင်ရမည်။ သို့မဟုတ်ပါကအပျက်သဘောဆောင်သောဇုန်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုအနာတရဖြစ်စေနိုင်သည်။. (ရွေ့လျားမှု၏ Newtons 1st ဥပဒ) ခ. တစ် ဦး inertia အနိုင်အထက်ဖန်တီးပါ, သင် inertia ကိုကျော်လွှားကူညီနိုင်မယ့်လှုပ်ရှားမှု (ဆွဲငင်အားနှင့်ပွတ်တိုက်အားကြောင့်ရွေ့လျားမှုခုခံ). #2. လုပ်ဆောင်ချက်အလယ် (Newtons 2nd ဥပဒေ) က. inertia breaker ပြီးနောက် Booster ဖြင့်အရှိန်မြှင့်ခြင်းကိုသင်လုပ်ရမည်. (တစ် ဦး booster ဒုံးပျံလိုပဲ, နောက်ထပ်အကူအညီတစ်ခု, တစ်စက္ကန့် stager) ခ. ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအားလုံး (ဥပမာလက်နှင့်ခြေထောက်များ), မည်သည့်အပြောင်းအရွေ့အတွက်ကြောင့်လာကြတယ်ဖြစ်လိမ့်မည်, ပိတ်ပင်သို့မဟုတ်ကန်, မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုမည်သည့် ဦး တည်ချက်အတွက်မဆိုလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲမှုကို enable လုပ်ရန်အမြဲတမ်းကွေးသောတံတောင်ဆစ်သို့မဟုတ်ဒူးခေါင်းလှုပ်ရှားမှုအဆုံးသတ်ရမည်. #3. လုပ်ဆောင်ချက်၏အဆုံးမှတ်ချက်: 'အဆုံး’ တ ဦး တည်းအလုပ်ပြီးဆုံးသည်အထိအရေးယူရပ်တန့်ဘယ်တော့မှသင့်အဖြစ်အရေးယူ၏စာသားမယူသင့်ပါတယ်. ကျွန်ုပ်တို့၏အဆုံးသတ်လုပ်ဆောင်ချက်’ ဒီအဆင့်နေဆဲအလယ်တန်းစင်မြင့်လျှင်အဖြစ်တစ်ခု interuppted ဆက်လက်မှပရိုဂရမ်ခံရဖို့ရှိပါတယ်. Martialarm တိုက်ဖျက်ရေးလေ့ကျင့်ရေးမိတ်ဖက်သိုင်းပညာဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတစ်ခုတွင်သင်တက်ရောက်ရန်ကျောင်းမရှိသောသို့မဟုတ်သင်နှင့်အတူလေ့ကျင့်သင်ကြားရန်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှမရှိသောအခြေအနေမျိုးကိုသင်အခါအားလျော်စွာသင်ရနိုင်သည်။. Martialarm သည် Wu shu လေ့ကျင့်ရေးစက်ဖြစ်သည်. ၎င်းသည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များ၏လက်နှင့်လက်များကိုထောင်ချောက်နှင့်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်စေရန်မည်သည့်နည်းစနစ်ကိုမဆိုစမ်းသပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်. Martialarm သည်တကယ့်ပြိုင်ဘက်တစ် ဦး ကဲ့သို့ရွေ့လျားပြီးတုံ့ပြန်သောကြောင့်ဤသို့ပြုလုပ်နိုင်သည်. အဆိုပါ Martialarm တက်လှည့်, ချ, ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်ကတကယ့်ပြိုင်ဘက်လိုပဲ – ဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်ပေါက်နိုင်ပြီးတော့ပြန်ဒဏ်ခတ်လိမ့်မယ်!. Martialarm Combat Training Partner ကိုအောက်ပါသီအိုရီများတွင်စမ်းသပ်ပြီးအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည် #1) ဘေးကင်းရေး – သင်ထိန်းသိမ်းရမည် 100% အန္တရာယ်အကွာအဝေးသို့ဝင်သည့်အခါဘေးကင်းလုံခြုံမှု, ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့ကိုဖုံးအုပ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောမည်သည့် variable ကိုမဆိုကန့်သတ်ရန်ဖြစ်သည်. (တိုက်ခိုက်နည်းများသည်ရှုပ်ထွေးသော်လည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်ရမည်, အစာရှောင်အဖြစ်လုံခြုံ!) #2) တိုက်ခိုက်မှု – သင်အလိုရှိသောအခါတိုက်ခိုက်ရန်စွမ်းရည်ရှိရမည်, ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိ၊ ပြproblemsနာမရှိဘူး. တိုက်ခိုက်မှုတွင်ပြိုင်ဘက်များ၏လက်နက်များကိုကောင်းစွာကိုင်တွယ်သင့်သည်. (တိုက်ခိုက်မှုများတွင်၎င်းတို့အတွင်းရှိရန်ဖွဲ့စည်းထားရမည် 100% ကာကွယ်ရေး!) #3) ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းနှင့် – နည်းပညာ, တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်ကာကွယ်ရေးများသည်ပုံမှန်စီးဆင်းမှုရှိသော်လည်းစီးဆင်းမှုရှိရမည်. ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းနှင့်နောက်လာမည့်အရာကိုရွေးချယ်နိုင်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်! Martialarm Martial Develop of Power တရုတ်စတိုင်အများစုသည်စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်သောချဉ်းကပ်မှုကိုအသုံးပြုသည်. မလိုအပ်သောကြွက်သားများကိုထိုနည်းစနစ်တွင်မပါ ၀ င်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားသည်, အချို့သောနည်းစနစ်၏အဓိကပန်းတိုင်များကို၎င်း၏ရလဒ်ကိုရရှိခြင်းမှတားဆီးရန်ရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်. အမှန်ကတော့, ဖြောင့်သောလာကြတယ်ဆိုတာ triceps မောင်းနှင်သောနည်းစနစ်ဖြစ်ပြီးတရုတ်စတိုင်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းတွင် triceps ကိုသိသိသာသာ biceps ပါဝင်မှုကိုတားဆီးခြင်းမရှိဘဲအလုပ်ကိုလုပ်ရန်ခွင့်ပြု. အခြားနည်းစနစ်အများစုကိုအလားတူပုံစံဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည် – သင့်တွင်ကြွက်သားများရှိပြီးနည်းစနစ်တစ်ခု၏ထိရောက်စွာကွပ်ကဲနိုင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်ကြွက်သားများရှိသည်, သို့မဟုတ်သော technique ကိုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်အခါပင်တန်ပြန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဖြစ်ကြသည်. ဘယ်သိုင်းရိုင်းစတိုင်ပုံစံမဆိုသင်လုပ်ဆောင်ပါ, မလိုအပ်သောကြွက်သားများပါဝင်မှုကိုရှောင်ကြဉ်ပါ. များစွာသောတရုတ်စတိုင်လ်များသည်ပိုမိုအသုံးပြုသည် “နောက်ဆက်တွဲ” ပစ်မှတ်ဇုန်မှတစ်ဆင့်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးအလေးချိန်ကိုကားဖြင့်မောင်းနှင်ခြင်းဖြင့်သူတို့၏စွမ်းရည်ကိုရရှိသည်. ထိတွေ့မှုမလုပ်မချင်းလက်မောင်းသည်သက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီးခလုတ် သုံး၍ နည်းစနစ်ကိုအာရုံစိုက်သည့်အခါခန္ဓာကိုယ်သည်ပစ်မှတ်သို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာမောင်းနှင်နေသည်။. ခန်ဓာကိုယ်၏စွမ်းအားလိုင်းနှင့်အတူမရွေ့ခင်၎င်းတွင်ခန်ဓာကိုယ်ကိုကျော်လွှားရန်ပိုမိုချို့တဲ့သည်, ရလဒ်အနေဖြင့်, စွမ်းအင်သည်ခန္ဓာကိုယ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပိုမိုစုပ်ယူသည်ထက်ခန္ဓာကိုယ်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ပိုမိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားနေသောရွေ့လျားမှုကိုဖယ်ရှားသည်, အင်အားတစ်ခုအလျားလိုက်လိုင်းနှင့်ဝသကဲ့သို့. Martialarm တိုက်ခိုက်ရေးစနစ်များလက်နက်များ Martialarm စနစ်သည်သဘာဝကိုယ်ခန္ဓာလက်နက်များစွာကိုအသုံးပြုသည်, သူတို့ထဲကအနည်းငယ်မျှမျှတတအထူးပြု. အဓိကတစ်ခုဖြစ်သည်: ? လက်သီးဆုပ်. (နေလက်သီး, နဂါး ဦး ခေါင်း, Phoenix မျက်လုံးနှင့်ကျားသစ် Paw) ? Palm သပိတ်မှောက်. (Tile Shattering, ယဉ် / ယန်, လိုချင်တယ်?အနိမ့်အရွက်နှင့်ဟာရီကိန်း Palm). ? လက်ချောင်းများ. (ပျံ Fingers, မသေနိုင်သောလမ်းကိုညွှန်ပြ, အမွှာနဂါး, ကျား Claw, လင်းယုန်လက်သည်း, နဂါး Claw, ကြွက် Claw နှင့်ဂဏန်း Claw). ? နောက်သို့လက်သီးဆုပ်. (ဤရွေ့ကားလိုက်နာဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်?ထက် the ဖမ်းယူမှတဆင့်’ ဗားရှင်း). ? အောက်ခြေလက်သီးသပိတ်. (Iron Hammer သည်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ tettsui နည်းပညာနှင့်တူညီသည်). ? လက်ဖျံသပိတ်မှောက်. (ဤသည်ကိုရိုက်ချိုးရန်အသုံးပြုသည်, ကြီးစွာသောပါဝါရိုက်နှက်). ? တံတောင်ဆစ်ရိုက်. (ဤသည်ကိုယေဘုယျအားဖြင့်သပိတ်မျိုးစုံ သုံး၍ အလွန်ပြောင်းလွယ်သောနည်းလမ်းဖြင့်အသုံးပြုသည်). ? ပခုံးသပိတ်. (အနီးကပ် -In အလုပ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်, ၏?လာကြတယ်သို့တစ် ဦး ပြိုင်ဘက်ထွက်တွန်းအားပေးရန်ဆယ်?ing အကွာအဝေး). သင်မြင်သည့်အတိုင်း, များစွာသောကိစ္စများတွင်အထူးပြုလက်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုတင်းကျပ်စွာပစ်မှတ်ထားအသုံးပြုခြင်းကိုအလေးထားသည်. ထိထိရောက်ရောက်သပိတ်မှောက်ရန်မျှော်လင့်ချက်ကိုစွန့်လွှတ်ရုံမျှဖြင့်မလုံလောက်ပါ. လက်စွပ်အခြေအနေမှာ, က “ဘယ်အချိန်မှာသံသယ, လက်သည်း” နည်းဗျူဟာကိုသင်ရမှတ်လိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်လမ်းပေါ်မှာကထိရောက်မှုရှိလိမ့်မည်, သင်အရေးပါသောအချက်တစ်ခုအပေါ်သက်ရောက်ရန်လုံလောက်သောကံကောင်းမဟုတ်လျှင်. တိကျသော, ထလေ၏?သင်၏ပြိုင်ဘက်၏အရေးကြီးသောသို့မဟုတ်အားနည်းသောပစ်မှတ်များထဲမှတစ်ချက်သို့သပိတ်မှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကန်ခြင်းပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီးသင်၏ပေါင်းစပ်မှုများကိုဤအချက်နှင့်အညီပုံစံချထားရမည်. Martialarm စနစ်နည်းပညာဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုများ 1. ၏တော်လှန်ရေးကိုယ်ခံပညာတွေးခေါ်နှင့်ဒီဇိုင်း “ဖော်မြူလာ Fighting” ဒါမှမဟုတ် “နံပါတ်များအားဖြင့်ကိုယ်ခံပညာ” ကြောင်း Pre-emptive တိုက်ခိုက်ခွင့်ပြုပါတယ် – သမားရိုးကျထက်အများကြီးပိုမြန် system ကို “တုံ့ပြန်မှုတုံ့ပြန်မှု” တိုက်ခိုက်ရန်. 2. ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ကိုယ်ခံပညာသိပ္ပံပညာ – အားလုံးသောစတိုင်များကိုလေ့ကျင့်သူအားလက်ရှိနည်းပညာများကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ပြုပြင်ရန်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်နှင့်နည်းပညာအထောက်အထားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်စနစ်ဖြစ်သည်, သဘောတရားများနှင့်နည်းပညာများ. 3. အောက်ပါနည်းပညာများတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည် – က. အမြင်အာရုံမရှိသောတိုက်ခိုက်ရေးခ. စမတ်လက်နက်စနစ်များဂ. ကိုယ်ပျောက်လက်နက်စနစ်များ d. မီးနှင့်မေ့လျော့စနစ်များ e. ကျိုးပဲ့ရစ်သမ်စွမ်းအင် f. Plyometrics applications များဆ. U.F.O. လှုပ်ရှားမှု h. အမှားပရိုဂရမ်များကောင်တာ. အမှားများကိုတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်သို့ပြောင်းပါ။ j. ရွေးချယ်သုံးခုအလိုအလျောက်အဆိုပါသုံး Cs ပစ်မှတ်ထား – စွမ်းရည် – ထိန်းချုပ်မှု – ယုံကြည်မှု technological ကြီးမားသောနည်းပညာဆိုင်ရာအစွန်းနှင့်မာကျောသောကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ပြိုင်ဘက်အားဖြင့်ပြိုင်ဘက်ကိုပါ ၀ င်စေခြင်းသည်သေချာသည်. 1. စွမ်းဆောင်နိုင်မှု – လက်ရှိတိုက်ခိုက်ရေးစနစ်များ၏နည်းပညာများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောကိုင်တွယ်မှုဖြင့်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်လုံးဝသုတ်သင်သောအယူအဆများကိုအခြေခံသည့်ကိုယ်ခံပညာရပ်ဖြစ်သည်. 2. ထိန်းချုပ်မှု – ပြိုင်ဘက်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်ခွင့်ပြုခြင်းသည်သူ့ကိုခုခံကာကွယ်မှုအားနည်းခြင်းကိုဖြစ်စေသည်. နေ့စဉ်အသက်တာ၌ရှိသကဲ့သို့မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်နိုင်သည်. 3. ယုံကြည်မှု – သေးငယ်သည်, အဆိုပါ unco-ordinated, မသန်စွမ်းသူများနှင့်အကောင်းဆုံးနှင့်အတောက်ပဆုံးသည်ဤလေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရရှိစေလိမ့်မည်. Martial Arm Martial Science ကမ်းလှမ်းမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမခံနိုင်သော Attack စနစ်များ. ချိုးဖောက်ခံရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသောဒိုင်းလွှား. ခန်ဓာကိုယ်တင်းကျပ်စွာ, ဖော်မြူလာတိုက်ခိုက်ရေး, ကိုယ်ပျောက်နှင့် U.F.O လက်နက်များ. ပြိုင်ဘက်ကိုပိတ်ပစ်သော freeze နည်းပညာကိုစိတ်ထားပါ. 3Cs စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုသည်ယုံကြည်မှုကိုရရှိစေသည်. ကိုယ်ခံပညာ Martial Science အယူအဆ 1. ရိုးရာတိုက်ပွဲတွေစနစ်များ – တိရိစ္ဆာန်စတိုင်များသို့မဟုတ် kata အပေါ်အခြေခံပြီးနှင့် ritualised. 2. acclectic ကိုယ်ခံပညာစနစ်များ – လူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ပုံစံအသစ်တစ်ခုသို့မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုစုဆောင်းခြင်း. 3. ဒီဇိုင်နာကိုယ်ခံပညာ – သတိစိတ်၏အသုံးဝင်သော, သိပ္ပံနည်းကျနှင့်ပြန်လုပ်. Bruce Lee နှင့်တူညီမှုတစ်ခုထပ်တူပြုခြင်း parrying & တစ် ဦး အဝင်တိုက်ခိုက်မှုမှတက်ရပ်နေသည့်အခါသပိတ်မှောက်; တိုက်ခိုက်မှု parried သို့မဟုတ်လမ်းလွဲခြင်းနှင့်တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ချိန်တည်းမှာကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်. Stop stop ကဲ့သို့အဆင့်မမြင့်သော်လည်းတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုတားဆီးခြင်းနှင့်တန်ခြင်းထက် ပို၍ ထိရောက်သည်. ၎င်းကိုတရုတ်ကိုယ်ခံပညာအချို့ကလည်းကျင့်သုံးသည်. ရွေ့လျားမှုစီးပွားရေး JKD ကျောင်းသားများကိုအချိန်နှင့်လှုပ်ရှားမှုကိုမဖြုန်းတီးရန်ပြောထားသည်. JKD ကိုတိုက်ထုတ်သည့်အခါအလွယ်ကူဆုံးသောအရာသည်အကောင်းဆုံးဟုယုံကြည်ကြသည်. Lee လိုယုံကြည်တဲ့ရေလိုပါပဲစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဟာတတ်နိုင်သမျှပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသင့်တယ်. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်ကိုယ်ခံပညာတွင်အလိုရှိသည့်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်သူသည်ရေကိုထပ်ခါထပ်ခါအသုံးပြုခဲ့သည်. ရေလုံးဝပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်. မြင်နိုင်ပါတယ်, သို့သော်အခြားအချိန်များတွင်မူအရာဝတ္ထုများကိုမျက်မှောက်မှေးမှိန်သွားစေနိုင်သည်. ဒါဟာခွဲခြင်းနှင့်အမှုအရာပတ်လည်သွားနိုင်ပါတယ်, အခြားဘက်မှာပြန်လည်, သို့မဟုတ်ပါကအမှုအရာမှတဆင့် crash နိုင်ပါတယ်. ၎င်းသည်ကျောက်တုံးများကိုညင်ညင်သာသာထိုးခြင်းဖြင့်အခက်ခဲဆုံးကျောက်များကိုတဖြည်းဖြည်းတိုက်စားနိုင်သည်သို့မဟုတ်အသေးငယ်ဆုံးကျောက်စရစ်ခဲကိုဖြတ်စီးနိုင်သည်. လီသည်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွင်ဤအပြုအမူများရှိသင့်သည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်. JKD ကျောင်းသားများသည်ရိုးရာလေ့ကျင့်မှုစနစ်များကိုငြင်းပယ်သည်, ဤသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မရှိခြင်းကြောင့်ရိုးရာကွန်ဖူးကျောင်းများတွင်အသုံးပြုသောတိုက်ပွဲပုံစံများနှင့်ကွန်ဖြူးရှပ်လမ်းညွှန်မှု. JKD ကိုအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေသောပြောင်းလဲနေသောအယူအဆဟုမကြာခဏဆိုလေ့ရှိသည်, အရှင်အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ခြင်း. “အသုံးဝင်သောအရာကိုစုပ်ယူပါ; အသုံးမကျသောအရာကိုလျစ်လျူရှုပါ” မကြာခဏကိုးကား Bruce Lee Maxim ဖြစ်ပါတယ်. JKD ကျောင်းသားများကိုရရှိနိုင်သောတိုက်ပွဲပုံစံအားလုံးကိုလေ့လာရန်တိုက်တွန်းပါသည်. ဤသည်သည်အခြားတိုက်ခိုက်ရေးစနစ်များ၏တ ဦး တည်းရဲ့အသိပညာကိုချဲ့ထွင်ရန်ယုံကြည်နေသည်; နှစ် ဦး စလုံးမှတ ဦး တည်းရဲ့အာဆင်နယ်အသင်း add အဖြစ်ထိုကဲ့သို့သောနည်းဗျူဟာဆန့်ကျင်ခုခံကာကွယ်ဖို့ဘယ်လိုသိရန်. hits ကိုရပ်တန့် / stop kicks ဤသည်သည်ရိုးရှင်းသောပိတ်ပင်တားဆီးမှုအစားသင်၏ကိုယ်ပိုင်တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ပြိုင်ဘက်တစ် ဦး ၏တိုက်ခိုက်မှုကိုလမ်းကြောင်းလွှဲခြင်းဟုဆိုလိုသည်. JKD ကျောင်းသားများသည်၎င်းသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အခက်ခဲဆုံးခုခံကာကွယ်စွမ်းရည်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်. ဤမဟာဗျူဟာအစီအစဉ်သည်အချို့သောရိုးရာတရုတ်ကိုယ်ခံပညာ၏လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်. အဘယ်သူမျှမမြင့်မားသောကန်ဘော JKD ယောဂီသူတို့ပြိုင်ဘက်ရဲ့ shins မှ၎င်းတို့၏ကန်ဘော mark သင့်တယ်ကောက်ချက်ချ, ဒူးထောက်ခြင်း, ပေါင်, နှင့်အလယ်ပိုင်းအပိုင်း. ဤရွေ့ကားပစ်မှတ်ခြေမှအနီးဆုံးဖြစ်ကြသည်, ပိုပြီးတည်ငြိမ်မှုကိုပေးဆန့်ကျင်ခုခံကာကွယ်ဖို့ပိုခက်ခဲဖြစ်ကြသည်. သို့သော်, အခြားသော JKD အခြေခံမူများနည်းတူမည်သည့်အရာမျှမရှိပါ “ကျောက်စာ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏”. ပွင့်လင်းareaရိယာသူ့ဟာသူတင်ဆက်ပါ; ခါးအထက်မှပစ်မှတ်တစ်ခုပင်ဤနိယာမအားဖြင့်ဝန်ကိုမခံစားရဘဲအခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်. အဘယ်အရာကိုအမှန်တကယ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအနုပညာဖြစ်ပါတယ်?
သစ်သားဘေ့စ်ဘောလင်းနို့ – Wood ကနေလူမီနီယမ်အထိ
ဘေ့စ်ဘောလင်းနို့သည်ရိုးရှင်းသောအယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်. သင့်အား၎င်း၏စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောသမိုင်းနှင့်ဒီဇိုင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ရန်ဘေ့စ်ဘောလင်းနို့အချို့သောအချက်အလက်များဖြစ်သည်. ဘေ့စ်ဘောလင်းနို့များအကြောင်းသင်ပိုမိုသိရှိလေ, ပိုများသောသင်သည်ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်အားကစားနှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကိုယ်ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်. သင်ဝယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီလင်းနို့၏အခြေခံအကျဆုံးသဘောတရားများကိုချုပ်ကိုင်ထားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်. ဒီတော့, နောက်ထပ် ado မရှိဘဲ, ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ baseball bats အချက်အလက်များ: တစ် ဦး ကဘေ့စ်ဘောလင်းနို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ချောမွေ့ ‘လှံတံကိုဖြစ်ပါတယ်’ ထို Battery ကိုအိုးအားဖြင့်ပစ်ချဘောလုံးကိုဝင်တိုက်ရန်အသုံးပြုသည်, အခြေစိုက်စခန်းပတ်ပတ်လည်ကို run နှင့်နောက်ဆုံးတွင် homerun ဂိုးသွင်းရန်အခြားကစားသမားအချက်ပြ. လင်းနို့၏အထူဆုံးအစိတ်အပိုင်း, ဘောလုံးကိုဝင်တိုက်ဖို့ထင်သောအစိတ်အပိုင်း, အဆိုပါ '' စည်ဟုခေါ်သည်’ နှင့် '' စည်၏အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်း’ ဘောလုံးကိုနှိပ်ခြင်းအတွက် 'ချိုသောအစက်အပြောက်' ဟုခေါ်သည်။’ နောက်ဆုံးတွင်စည်သည်လက်ကိုင်သို့ရောက်သည်အထိပါးလွှာပြီးပိုပါးလာသည်. သတ္တုလင်းနို့ပေါ်မှာ, ရော်ဘာသည်ကောင်းစွာကိုင်တွယ်ရန်လက်ကိုင်ပတ်ပတ်လည်ကိုလေလိမ့်မည်. အဆိုပါ ‘ဖု’ စည်ရဲ့အစွန်အဖျား၏အလွန်ဆန့်ကျင်ဘက်အဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်နှင့်ဝေးပျံမပါဘူးဒါကြောင့်တစ် ဦး Battery ကိုလင်းနို့ပေါ်သို့ဆွဲထားဖို့ကူညီပေးသည်! မည်သူမျှဂရုမစိုက်ပုံမရသည့်ဈေးပေါသောလင်းနို့ကိုမဝယ်ခင်ဤအကြောင်းကိုစဉ်းစားပါ. ဘေ့စ်ဘော၏အစောပိုင်းကာလ၌, ငယ်ရွယ်သောကစားသမားများသည်ပျံ့နှံ့နေပြီးလင်းနို့အများစုသည်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ကြသည်, ဒါကြောင့်အရွယ်အစားနှင့်ပုံစံများကိုလှသောကွဲပြား. သို့သော်ဘေ့စ်ဘောသည်တရားဝင်ဖြစ်လာသည်, စည်းမျဉ်းအားကစား, ဘေ့စ်ဘောလင်းနို့များလည်းပြုခဲ့ကြသည်. In 1859, လင်းနို့၏အချင်းနှင့်ပတ်သက်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်, နှင့်ယနေ့တိုင်လိဂ်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှမျိုးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တစ် ဦး ချင်းစီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်. ထို့ကြောင့်, သငျသညျဘေ့စ်ဘောလင်းနို့တိုင်းတာပေါ်တွင်သင်၏လိဂ်ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ. လင်းနို့အားလုံးသည်အချင်းချင်းဆင်တူသော်လည်း, လူ့မျက်စိအတွက်မသိသာသောသေးငယ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်. ငါဒီသမိုင်းဝင်ဘေ့စ်ဘောလင်းနို့အချက်အလက်များအသုံးဝင်သောခဲ့ကြသည်မျှော်လင့်ပါတယ်! သစ်သားဘေ့စ်ဘောလင်းနို့ – Wood ကနေလူမီနီယမ်အထိ
ရေငုပ်သမား, သူတို့သမုဒ္ဒရာနှင့်သမုဒ္ဒရာ၏မျက်နှာပြင်အောက်မှာရှင်သန်သောအလှတရားကိုချစ်ဘာကြောင့်မေးသောအခါ, ဖြစ်ကောင်းကွဲပြားခြားနားသောအဖြေကိုရှိသည်လိမ့်မယ်. သို့သော်အများဆုံးဖွယ်ရှိ, ဘုံပြန်ကြားချက်သူတို့သမုဒ္ဒရာ၏လူဖြစ်ကြ၏ဖြစ်လိမ့်မည်. ဤအဖြေအတွက်လုံလောက်သောယုတ္တိဗေဒရှိသလား၊ လုံးဝမရှိသည်ဖြစ်စေမေးမြန်းသူအားကျန်ရှိနေသည်. သို့သော် scuba ရေငုပ်သမားများသည်တညီတညွတ်တည်းသဘောတူ။ အဖြေမပေးနိုင်ပါ’ သူတို့သမုဒ္ဒရာယုံကြည်စိတ်ချလျှင်မေးသောအခါ. သဲကန္တာရနှင့်၎င်း၏သဲများကဲ့သို့, သမုဒ္ဒရာနှင့်စမ်းရေများတို့သည်အလွန်မိုက်ကြ၏. သူတို့ကယခုတည်ငြိမ်အေးဆေးဖြစ်ကြသည်, စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောနှင့်ရုပ်ဆိုးနောက်တစ်နေ့. ဒါပေမယ့်နေဆဲ, သမုဒ္ဒရာ၏လူများသည်သမုဒ္ဒရာ၏တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုဆွဲဆောင်သည်. တစ်ချိန်လုံးတနင်္ဂနွေနေ့တွင်ထွက်ပေါ်လာနိုင်သည့်ဒေါသကိုလက်ခံကြသည်. ပြီးတော့သမုဒ္ဒရာမှာစားပွဲပေါ်မှာမုန်တိုင်းနှင့်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတွေများတယ်. ဒါဟာပါဝါကိုလျှော့တွက်သောသူသည်ရေငုပ်သူအရူးနိုင်ပါတယ်. သင်ရေထဲတွင်နေလေဖြစ်သည်, သေခြင်းနီးလေပြီ. နက်ရှိုင်းသောရေပြတ်တောက်မှုသည်အတွေ့အကြုံရှိပြီးလိုင်စင်ရရေငုပ်သမားများဘဝကိုဆုံးရှုံးစေသည့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်, အချို့မှာမှန်ကန်သောကိရိယာများ၊ Reactor နာရီများနှင့် scuba gear များတပ်ဆင်ထားသည်. နက်ရှိုင်းသောရေငုပ်ခြင်းမှတက်ကြွနေစဉ်ရေငုပ်သူသည်သတိလစ်သွားသောအခါ Deep Water Blackout ဖြစ်ပေါ်လာသည်, ပုံမှန်အားဖြင့်ကနေ 10 မီတာနက်ရှိုင်း. သားကောင်များသည်မျက်နှာပြင်နှင့်နီးကပ်စွာမောနေကြသည်, ထိပ်အတွင်းအချိန်အများစုကို3မီတာ. တချို့ကသားကောင်ပင်မျက်နှာပြင်ကိုချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့သည်, နောက်တဖန်နစ်မြုပ်ဖို့သာ. အထက်ပါဖြစ်စဉ်၏တိုက်ရိုက်အကြောင်းရင်းမှာမြင့်တက်နေစဉ်အောက်စီဂျင်အမြန်ကျဆင်းခြင်းဖြစ်သည်. ရေအနက်ရောင်, ရေနစ်လို့ရေငုပ်တာကြောင့်ရေငုပ်သမားကိုမသတ်တော့ဘူး, ဦး နှောက်ထဲတွင်နိုက်ထရိုဂျင်မရှိခြင်းကြောင့်ရေငုပ်သမား၏ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်အားလည်းအားနည်းစေသည်. အဆိုပါရေငုပ်သူထို့နောက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ့ကြုံခံစား, ကြောက်တယ်, နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Dexter ၏ဆုံးရှုံးမှု. ရေအောက်တွင်တည့်တည့်စဉ်းစားနိုင်စွမ်းကိုဆုံးရှုံးသောရေငုပ်သမားများသည်မျက်နှာပြင်ကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာမျောပါသွားသည်, သူတို့တက်နေကြသည်ထင်. နက်ရှိုင်းသောရေပြတ်လပ်မှုမှအသက်ရှင်ကျန်သူများသည်စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းများကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်, သူတို့ကရေအောက်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုမြင်နေရတယ်လို့ပြောတယ်. သဲကန္တာရနှင့်၎င်း၏ mirages လိုပဲ, သမုဒ္ဒရာ, ထို့အပြင်သတိမရှိသောရေငုပ်သမားအတွက်ပြင်ဆင်ထားထင်ယောင်ထင်မှားရှိပါတယ်. သမုဒ္ဒရာကိုလေးစားပါ, ချစ်တယ်. ဒါပေမယ့်မင်းကိုသေစေနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုမင်းဘယ်တော့မှမယုံတော့ဘူး. သဲသောင်ပြင်အောက်မှခရီးသွားများကိုသင်္ဂြိုဟ်ခဲ့သောသဲကန္တာရသဲခုံများကဲ့သို့, သမုဒ္ဒရာ, ထို့အပြင်၎င်း၏သင်္ချိုင်းအဘို့အအေးတွင်းနက်ရှိပါတယ်. နောက်ဆုံးအသက်ရှူဘို့အသေခံခြင်း
Dudek ကနေဖယ်ထုတ်လိုက် 23 ပိုလန်ရဲ့အမျိုးသားရေးအသင်းများအတွက်က Man စာရင်း
လီဗာပူးလ်မှဂိုးသမားကြယ်ပွင့်, Jerzy Dudek သည်စာရင်းကိုတုန်လှုပ်ချောက်ချားစေသည် 23 သူသည်မိမိအရွေးခြယ်ပေးသောအခါနည်းပြ Pawel Janas လုပ်သောယောက်ျား 2006 ပိုလန်ဂျာမနီမှယူပြီးကြောင်းကမ္ဘာ့ဖလားကစားသမား. Dudek ဟာ Legia Warsaw ရဲ့အဆို့ရှင် Lukasz Fabianski ကိုနေရာချလိုက်ပါတယ်။. Dudek ဟာဂိုးသမားကောင်းတစ်ယောက်ပါ; ကျနော်တို့ကသူ့ပင်နယ်တီရပ်တန့်သည့်အခါပြီးခဲ့သည့်နှစ်ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲ၌သူ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့်လီဗာပူးလ် AC Milan ကိုအနိုင်ယူကူညီပေးခဲ့သည်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်. သူဟာပိုလန်နဲ့ကစားဖို့အလွန်နည်းနည်းပဲကစားခဲ့ရတာကကလပ်အဆင့်မှာကစားနေသူတွေကိုပိုသဘောကျစေတယ်. တိုက်စစ်မှူး Tomasz Frankowski မှ? Wolverhampton Wanderers အဆိုပါခြေစစ်ပွဲချီတက်ပွဲအတွက်အသင်းရဲ့ထိပ်တန်းဂိုးသွင်း, အလယ်ပိုင်းတစ်ဝက်နှင့်ကပ္ပတိန်ဟောင်းသောမတ်စ်ကလော့စ်တို့လည်းထွက်ခွာသွားခဲ့သည်. အဲဒီအစား, Janas သည် Wisla Krakow တိုက်စစ်မှူး Pawel Brozek နှင့် Krakow fullback Dariusz Dudka တို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။. ဒီကစားသမားတွေဟာအရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့နှလုံးသားဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလာတဲ့အခါပြောင်းရွှေ့ကြေးဟာအဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်, နှင့်အရည်အချင်းလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ပြီးဆုံးခဲ့သည်. Dudek ကနေဖယ်ထုတ်လိုက် 23 ပိုလန်ရဲ့အမျိုးသားရေးအသင်းများအတွက်က Man စာရင်း
အဆိုပါ Booz Allen ကဂန္ထဝင်
Booz Allen Classic သည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပသော PGA Tour ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲဖြစ်သည်, ၎င်းကိုဇွန်လတွင် Potomac Maryland တွင်စီစဉ်ထားသည်. အဆိုပါပြိုင်ပွဲက၎င်း၏အတိတ်တလျှောက်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်, ဥပမာအားဖြင့်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ရပ်အတွက်ကစားခဲ့သည် 1968 Sutton အတွက်သာယာသောချိုင့် Country Club မှာ, မက်ဆာချူးဆက်. ပွဲပြီးနောက် Charlote ရှိ Quail Hollow Country Club သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်, မြောက်ကာရိုလိုင်းနားနောက်နှစ်နှင့်သည်အထိအဲဒီမှာနေ၏ 1979. In 1980 Bethesda ရှိကွန်ဂရက်ကလပ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်, မေရီလန်းပြည်နယ်သည်ခြောက်နှစ်အထိထိုတွင်နေထိုင်ခဲ့သည် 1986. ဒါပေမယ့်ကတည်းက 1987 ပြိုင်ပွဲကို Potomac ရှိ Avenel ရှိ TCP တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည် 2005 TCP Avenel တွင်တိုးတက်မှုအချို့ရှိနေသောကြောင့်၎င်းသည်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကလပ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ရသည်. ဒီနှစ်မှာတော့ဒီအဖြစ်အပျက်ကို TCP မှာပြန်ကျင်းပဖို့စီစဉ်နေပါတယ်. အဖြစ် 2006 ပြိုင်ပွဲကိုဇွန် ၂၂ ရက်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးဇွန် ၂၅ ရက်တွင်အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးပိုက်ဆံအိတ်မှာဖြစ်သည် $5,000,000 နှင့်အတူ $900,000 အနိုင်ရသည်. အပြေးသမားတက်လိမ့်မယ် $540,000 တတိယနေရာ $340,000. ပြိုင်ပွဲ၏နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုတနင်္လာနေ့အထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည် 8:00 နံနက်. ရာသီဥတုအခြေအနေအချို့ကြောင့် (မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်း), ကစားသမားများစောင့်ဆိုင်းရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေဆိုတဲ့အချက်ကို. အခမ်းအနားကိုအနိုင်ရသူအဖြစ်ဆုံးနှင့်ယခုအထိပထမဆုံးနေရာတွင် ဦး ဆောင်သူမှာ Ben Curtis ဖြစ်သည်. အဆိုပါ Booz Allen ကဂန္ထဝင်
It’s Germany 2006, another World Cup and another outrageous exhibition of diving, gamesmanship and just downright cheating. The time has come to callahalt on this scandalous behavior and restore the image of the beautiful game. Sepp Blatter ordered referees to come down hard and keep the lid on unruly players. The problem is the cheats have seen this as an opportunity to take advantage of the hard-line approach. By diving and conning the referee they know they can get even more of their opponents booked or sent off and banned for forthcoming games. It seemsaridiculous situation where millions of fans around the world can view replays and know the truth within seconds, yet the only man in the dark is the man in charge and entrusted with keeping the integrity of the match. With the referees now wired for sound and in constant communication with each other, surely the time has come for an official sat in front ofatelevision replay who can inform the referee of what really happened. တကယ်ပါပဲ, cheating has now sunk to such depths that even one of football’s finest professionals has succumbed. Thierry Henry isaplayer adored both sides of the English Channel and has always showed the greatest sincerity onafootball pitch. Yet this was the same Henry who went down clutching his face as if he had been elbowed, yet suffered nothing more thanafirm shoulder to his chest. The resulting free kick led to effectively what was the winning goal for France against Spain in the second round of the World Cup. Now I’ve nothing but the greatest admiration for Thierry Henry as bothaman andaprofessional footballer, but what chance has the game got when one of its greatest ambassadors sinks to such levels. Come on FIFA, its time cheating was removed from the beautiful game. It’s Time To End The Reign Of The Football Cheats
အမေရိကန်ဒဏ္endာရီ ~ Winchester ကရဲ့နိဂုံးကိုသေ
မတ်လတွင် 31, 2006, အသိပေးချက်သိပ်မရှိပါဘူး, အမေရိကန်ဒဏ္endာရီဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကွယ်လွန်သွားပြီးအမေရိကားနားမှတစ်ဆင့်သမိုင်းဝင်အမှိုက်ပုံထဲသို့တိတ်တဆိတ်မှေးမှိန်သွားခဲ့သည်. ထိုနေ့, U.S. Repeating Arms Co., Winchester ရိုင်ဖယ်များကိုထုတ်လုပ်သူများကသူတို့၏ New Haven ကိုပိတ်ခဲ့သည်, ကောင်းသောအဘို့အ Connecticut စက်ရုံ, ထုတ်ကုန်တစ်ခု၏ဘဝကိုအဆုံးသတ်လိုက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်၏ကြီးထွားမှုနှင့်သမိုင်းတွင်အလွန်နီးကပ်စွာဆက်နွှယ်နေသဖြင့်နှစ်ခုခွဲခြား။ မရနိုင်ပါ. ဒီပါဝင်ပတ်သက်မှုစတင်ခဲ့သည် 1857 Oliver Winchester ကပျက်ကွက်သောမီးတောင်ထပ်ခါတလဲလဲသေနတ်ကုမ္ပဏီကိုဝယ်ယူပြီးပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသည့်အခါ, နောက်ပိုင်းတွင် Winchester ကမှနာမကိုအမှီပြောင်းလဲနေတဲ့. သူတို့ရဲ့၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွင်း 149 နှစ်တည်ရှိမှု, Winchester ဆိုတဲ့ရိုင်ဖယ်ကိုရိုင်ဖယ်တွေနဲ့အဓိပ္ပါယ်တူတယ်, အထူးသဖြင့်လီဗာအရေးယူရိုင်ဖယ်, အရာဟင်နရီရိုင်ဖယ်နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်, သတ္တု cased သည့်အရာတစ်ခုကိုပစ်ခတ်ခြင်းနှင့်ကျင်းပသောလီဗာလှုပ်ရှားမှုရိုင်ဖယ် 16 ကျည်. ၎င်းသည် Union Soldiers များလက်ထဲတွင်စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည် 1862 နှင့်ကွန်ဖက်ဒရိတ်တပ်များအလျင်အမြန်ကျိန်စာခံခဲ့ရသည် “သူတို့ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာတင်ရပြီးတပတ်လုံးပစ်ခတ်ကြတာပါ။” ထို့နောက်လာ 1866 မော်ဒယ်, လို့ခေါ်တယ် “အဝါရောင်ကောင်လေး” ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တောက်ပသောကြေးဝါဘောင်၏ကြောင့်ဖြစ်သည်, ပြည်တွင်းစစ်အပြီးအနောက်ဘက်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်းရှေ့ဆောင်များအားသူတို့၏ခရီးကိုကာကွယ်ပေးခဲ့သည်. အဆိုပါအဝါရောင် Boy မော်ဒယ်အားဖြင့်နောက်သို့လိုက်ကြ၏ 1873 အဖြစ်လူသိများ “အနောက်ဘက်အနိုင်ရသောသေနတ်” နှင့်အချို့သောအိန္ဒိယအင်ဒီးယန်းများ၏ teepees အတွက်အခြေချအခန်းများ၏မီးဖို၌ကျော်ရှာတွေ့ခဲ့သည်. ၎င်းသည်ကောင်းဘွိုင်များနှင့်လက်နက်ကိုင်ဥပဒေပြုသူများ၏ကုန်းနှီးစွပ်စွဲချက်များနှင့်စီးနင်းလိုက်ပါလာခဲ့ကြပြီး၊. ဤအရာအားလုံး၏အထွation်အထိပ်သည်ပုံစံ၏နိဒါန်းဖြစ်သည် 1894, ကျော်များအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဖြစ်အနည်းငယ်လက်နက်များ၏တ ဦး တည်းဖြစ်လတ် 100 နှစ်များနှင့် Winchester တွင်ရောင်းခဲ့သည့်အရောင်းရဆုံးစင်တာမီးသတ်ရိုင်ဖယ်ဖြစ်သည်. Winchester နဲ့သမင်တွေပိုများလာတယ် 1894 လုပ်သောအခြားရိုင်ဖယ်ထက်ရိုင်ဖယ်. ဖြည့်စွက်ကာ, Winchester ကမော်ဒယ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ 70 အဖြစ်လူသိများဖြစ်လာခဲ့သည်သောမူလီ -action ကိုရိုင်ဖယ် “အဆိုပါ Rifleman ရဲ့ရိုင်ဖယ်”. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအမဲလိုက်စခန်းများတွင်တွေ့ရသည်, ဒါကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာဂိမ်းတိရိစ္ဆာန်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်. Winchester ကလည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ် 24/7 ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Doughboys နဲ့သူတို့သားတွေအတွက်ရိုင်ဖယ်တွေထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်, ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏ GI ရဲ့. ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်လွမ်းဆွတ်မှုကိုခွင့်လွှတ်ပါ, ဒါပေမယ့်မြေးတွေနဲ့တခြားယောက်ျားလေးတွေကရှည်လျားတဲ့ကျဉ်းမြောင်းတဲ့သေတ္တာတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပြီး Winchester ကစည်ပေါ်မှာတံဆိပ်တုံးနဲ့သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးရိုင်ဖယ်ကိုရှာတွေ့တဲ့အခါဘယ်တော့မှစိတ်လှုပ်ရှားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေးမိတာက ၀ မ်းနည်းစရာပါပဲ။, ဒီစာရေးဆရာသည်သူ၏ 15 မွေးနေ့အပေါ်ပြုသကဲ့သို့. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Winchester က, အမှတ်တရများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်လည်းဒီ Nation ရဲ့သမိုင်းအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအရေးကြီးသောနှင့်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစားဘို့. သင်ဝမ်းနည်းစွာလွဲချော်ပါလိမ့်မည်. အမေရိကန်ဒဏ္endာရီ ~ Winchester ကရဲ့နိဂုံးကိုသေ
ကျော်လွန် 45? Ten Reasons Why You Should Do The Ironman Triathlon
1) Just preparing for it by dieting properly and training could well put you in the best physical condition of your life. 2) By improving yourself, you doawonderful thing for your family and all those close to you. 3) In the eyes of those same people, you will bearole model,ahero and an inspiration. 4) You will give your life new meaning. Asa14 time Ironman(my last at 55), I guarantee it. 5) You will most likely learn new skills you previously knew nothing about. Just learning how to swim isahuge bonus and could one day save your life or the life of someone imporant to you. 6) In the course of your training and the race experience itself, you will meet some truly remarkable people. 7) You can combine your Ironman race withaholiday and take the family. Most important of all, they will be there to cheer you on and share in your incredible achievement. Its one of those situations where everyone wins. 8) For the first time, you will learn what you are truly capable of onaphysical, emotional and even spiritual level. You will amaze yourself and beabetter person for the total experience. 9) You will discover there are few challenges the human spirit cannot overcome and the strength within all of us just has to be given an opportunity to show itself. 10) Finish this race and you will forever have the title Ironman in front of your name. That can never be taken away from you and everytime you hear the word you will be reminded of whataremarkable journey it was and how taking up the challenge was the best decision of your life. Though many people in your circle may doubt you and wonder what on earth you are doing, don’t let anyone deter you from reaching this remarkable goal Over 45? Ten Reasons Why You Should Do The Ironman Triathlon
ဂေါက်သီးတံတောင်ဆစ်ဒဏ်ရာသည်မည်သည့်ဂေါက်ကွင်းတွင်မဆိုအလွန်ကြောက်မက်ဘွယ်သောဒဏ်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုတွက်ဆဖို့လည်းမခက်ဘူး. တစ် ဦး ဂေါက်သီးနှင့်အတူစတင်ရန်’ တံတောင်ဆစ်ဒဏ်ရာများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကောင်းမွန်စွာကုသရန်အချိန်များစွာကြာတတ်ပြီးဂေါက်သီးသမားသည်သင်တန်းပြန်တက်ပြီးမကြာမီတွင်မကြာခဏပြန်ဖြစ်တတ်သည်. Golfer တံတောင်ဆစ်ဒဏ်ရာသည်တင်းနစ်တံတောင်ဆစ်နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်, အရာတင်းနစ်ကစားသမားအညီအမျှကြောက်. ၎င်းသည်သင်တန်းမှဝေးလံသောနေရာများတွင်ဆရာ ၀ န်မှဆရာ ၀ န်များညွှန်ကြားမည့်ဒဏ်ရာအမျိုးအစားဖြစ်သည်. များစွာသောစိတ်အားထက်သန်ကစားသမားသည်, ဒီပိုဆိုးတာကပြစ်ဒဏ်တွေထက်ပိုပြီးအပြစ်ပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်, မကြာခဏ fi ဂေါက်သီးကနေချွန်ထက်နာကျင်မှု’ တံတောင်ဆစ်ဒဏ်ရာ. ဂေါက်သီးသမားတံတောင်ဆစ်ဒဏ်ရာသည်အနာပျောက်စေသောအကြောင်းရင်းနှင့်အချို့ကိစ္စများတွင်တစ်ခါမျှအမှန်တကယ်ပျောက်ကွယ်သွားရသည့်အကြောင်းရင်းရှိသည်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအဆစ်တစ်ခုပါ ၀ င်တဲ့ဒဏ်ရာအမျိုးအစားဖြစ်တယ်. အများအားဖြင့်အဆစ်ပေါ်မှဒဏ်ရာများကိုဒုက္ခပေးတတ်၏. အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာအဆစ်ကိုအပြည့်အဝအနားယူရန်ခက်ခဲပြီးလှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်ပြုလုပ်သည့်အခါကြွက်သားများကို အသုံးပြု၍ အဆုံးသတ်သည်. ထို့ကြောင့် fer golfer ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်အကြံဥာဏ်များသို့မဟုတ်အကြံဥာဏ်များ’ တံတောင်ဆစ်သည်မည်သည့်ဂေါက်သီးသမားအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်. ဂေါက်သီးကစားခြင်းတွင်အသုံးပြုသောဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းနှင့်ကြွက်သားများအတွက်လေ့ကျင့်ထားသောလေ့ကျင့်ခန်းများသည်ပါဝင်သောကြွက်သားများကိုအားဖြည့်ခြင်းနှင့်အေးစက်စေခြင်းအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်. ဂေါက်သီးသီးသန့်ကြွက်သားများကိုအားဖြည့်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကစားသမားသည်အဆုံးသတ်elရိယာအတွင်းရှိအရိုးများနှင့်ကြွက်သားများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောရွတ်များကိုဖိအားနည်းစေသည်။. ဤသည်ဂေါက်သီးကစားသမားများတွင်ဤဒဏ်ရာများ၏အန္တရာယ်ကိုအများကြီးလျော့နည်းစေသည်. ဂေါက်သီးပတ်ပတ်လည်နှင့်နွေးထွေးသောရာသီသို့မတက်မီလေ့ကျင့်ခန်းများကိုနွေးပါ, သင့်ရဲ့ဂိမ်းရဲ့အဆုံးမှာ, ထို့အပြင်ဂေါက်သီးတံတောင်ဆစ်ဒဏ်ရာအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရာတွင်များစွာအထောက်အကူပြုသည်. ပူနွေးလာမှုကဂိမ်းကစားခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်ဖိအားများကိုကြွက်သားများပေါ်တွင်မလွှမ်းမိုးစေရန်အာမခံသည်, အရာများသောအားဖြင့်သိသိသာသာဒဏ်ရာအမျိုးမျိုး၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုမရုံ ‘ဂေါက်သီးတိုးပွားစေပါသည်’ တံတောင်ဆစ်. Golfer တံတောင်ဆစ်ဒဏ်ရာအန္တရာယ်ကိုဘယ်လိုလျှော့ချနိုင်လဲ
သင်တစ် ဦး က New ရေကန်တွင်ပါတယ်…ဘယ်ဆွဲဆောင်ကိုသင်ရွေးချယ်သလဲ?
သင်တစ် ဦး က New ရေကန်တွင်ပါတယ်…ဘယ်ဆွဲဆောင်ကိုသင်ရွေးချယ်သလဲ? သင့်ရဲ့ဆွဲဆောင်ရွေးချယ်ပါ………..ဒါဟာသင်ရုံမကံကြမ္မာမရှိဘဲသင်အစဉ်အဆက်ငါးမျှားသို့မဟုတ်တစ်နေ့လုံးငါးဖမ်းခြင်းငှါငါးဖမ်းခြင်းနှင့်တစ်နေ့လုံးငါးဖမ်းဖူးပါသလား? ဒီတော့, နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲ, ဘာကြောင့်လဲ, သင်၏ကိုင်တွယ်ရမည့်သေတ္တာများမှ စတင်၍ သင်ရှာတွေ့နိုင်သမျှအားလုံးကိုစတင်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်. ဒါကကြီးလေးတဲ့အမှားပါ, အလေးသာမှုသည်သင်ကျန်ရှိသော day..Nothing နှင့်ရလဒ်တူတူရလိမ့်မည်! ဒါကြောင့်သင်ဘာလုပ်သလဲ? ကောင်းပြီ, သငျသညျပိုကြီးတဲ့အရွယ်အစားငါးစာကြိုးစားနိုင်ဘူး. အသုံးပြုမယ့်အစား 4-6 သင်အသုံးပြုနေတဲ့လက်မတီကောင်, စမ်းကြည့်ပါ ဦး 8-10 လက်မတီကောင်. အဘယ်ကြောင့်? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်နှေးကွေးသောကြောင့်ခေါင်းမာသောဘေ့စ်များသည်နှေးကွေးသောနှင်းများကိုပိုကြိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်. ဒါပေါ့, သငျသညျထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့အခြားအနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုယူရမည်ဖြစ်သည်; ရေအပူချိန်, ရေကန်အတွင်းရှိငါးများနှင့်တွားသွားသတ္တဝါများဖြစ်သည်, တစ်နှစ်တာ၏အချိန်နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ. ကြည်လင်သောရေတွင်အလင်းရောင်ဆွဲဆောင်ရန်ကြိုးစားပါ, နွေ ဦး ရာသီအစောပိုင်းတွင်ပိုမိုသေးငယ်သောဆွဲဆောင်မှုများကိုစမ်းကြည့်ပါ. အရိပ်သို့မဟုတ်လေထန်သည့်အခါ spinnerbaits သို့မဟုတ် crankbaits ကြိုးစားပါ. အကယ်၍ နေရောင်ထွန်းလင်းနေလျှင်ဘေ့စ်သည်ဖုံးအုပ်ရန်နီးကပ်လိမ့်မည်. သင်ငါးဖမ်းနေသောရေသည်ရွှံ့ဖြစ်ပါကပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးရေတိမ်ပိုင်းကိုသာငါးဖမ်းပါ. အကယ်၍ ငါးများသည်ရေတိမ်ပိုင်းတွင်မကိုက်ပါကရာသီဥတုကြောင့်ငါးများကိုထိခိုက်မှုမရှိသောနေရာတွင်အနည်းငယ်နက်ရှိုင်းစွာငါးမျှားပါ. ဒီဆွဲဆောင်မှုတွေကိုစမ်းကြည့်ပါ ဦး: တစ် ဦး crankbait, တစ် ဦး spinnerbait နှင့်ပလပ်စတစ်တီကောင်. သင်တစ် ဦး က New ရေကန်တွင်ပါတယ်…ဘယ်ဆွဲဆောင်ကိုသင်ရွေးချယ်သလဲ?
Bookie Buster ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – ကောင်းလားဆိုးလား?
ငါ့ကိုယ်ပိုင်စနစ်သို့ကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းရှိပြီးနောက်, ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောဒီ Bookie Buster သုံးသပ်ချက်ကိုရေးရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်. အလောင်းအစားလုပ်သည့်အခါစာအုပ်စာအုပ်များကိုတသမတ်တည်းအနိုင်ယူနိုင်ပါသလား? သင်၏တစ်နေ့တာအလုပ်မှနုတ်ထွက်ပြီးသင်၏ငွေတောင်းခံလွှာအားလုံးကိုလွယ်ကူစွာပေးချေရန်အမှန်တကယ်ဖြစ်နိုင်ပါသလား, တစ် ဦး တည်းအနိုင်ပေးလောင်းကစား၏ချွတ်? ဤအကျဉ်းချုပ်သုံးသပ်ချက်တွင်ဤမေးခွန်းများကိုကျွန်ုပ်ဖြေပါမည်, အခြားသူများအဖြစ်. Bookie Buster မှသင်အမှန်တကယ်ရရှိရန်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာများကိုပိုမိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ, စနစ်သည်သင်အသုံးပြုသင့်သည်မသင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီသည်. ငါသည်ငါ့တစ်နေ့အလုပ်ဝင်ငွေဖြည့်စွက်ရန်လောင်းကစားဖို့ကိုချစ်ကြတယ်. နောက်ဆုံးတော့, သို့သော်, ငါ့ဝါသနာကငါ့ကိုလုပ်တာထက်ပိုပြီးကုန်ကျတယ်ဆိုတာငါသိလိုက်တယ်. စာသား, ငါ '' သက်သေပြခဲ့စနစ်များအပေါ်ရာပေါင်းများစွာသုံးစွဲချင်ပါတယ်” ငါ၏အနိုင်ငွေတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အလောင်းအစားတိုင်းအောင်မြင်သောတစ်ခုလုပ်. သူတို့ထဲကအဘယ်သူမျှမအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်. ဒါကြောင့်ပဲ, ငါ Bookie Buster အကြောင်းကြားသောအခါ, ငါသံသယဖြစ်ခဲ့သည်. လောင်းကစားစနစ်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါ, သို့သော်, ငါ Bookie Buster သည်အခြားသူများနှင့်မတူကြောင်းသိခဲ့ရသည်. အားကစားတစ်ခုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောအခြားအစီအစဉ်များနှင့်မတူသည်, Bookie Buster သည်သင့်အားဘောလုံးလောင်းကစားများပြုလုပ်နိုင်သည်, ဘောလုံး, ဘေ့စ်ဘော, ဘတ်စကက်ဘော, တင်းနစ်, ဟော်ကီ, NCAA ဂိမ်းများနှင့်ပိုပြီး. စနစ်သည်လိုက်နာရန်လွယ်ကူသည်, အချိန်မရွေးသင်ပုံမှန်ပြုလုပ်နိုင်သည် $1,500 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလစဉ်လတိုင်း. ဖန်တီးသူ, Frank Belanger, ပိုပါတယ် $10,000 တစ်လ, နှင့်များစွာသောအခြားသူများသည်သူတို့၏တစ်နေ့တာအလုပ်များကိုစွန့်ခွာပြီးစနစ်ကိုသူတို့၏တစ် ဦး တည်းသောဝင်ငွေအရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်. ငါ e-book ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်လိုက်နာရန်ဘယ်လောက်လွယ်ကူပါတယ်အလုံအလောက်အလေးပေးလို့မရပါဘူး. အားကစားစာအုပ်ပိုင်ရှင်များကသင့်ကိုမသိစေချင်သော e-book တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များနှင့်လှည့်ကွက်များစွာရှိသည်. ကျွန်ုပ်သည် Bookie Buster အားကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်အားလုံး၏သံသယများကိုအထူးအကြံပြုလိုပါသည်, ကျွန်ုပ်အတွက်အကျိုးရှိနိုင်ကြောင်းပြောသောအခါကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်ပါ, ဒါကြောင့်မည်သူမဆိုများအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်. Bookie Buster ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – ကောင်းလားဆိုးလား?
သင်၏ငါးများကိုပစ်မှတ်ထားပြီးသိမ်းထားပါ – လင်းယုန် SeaFinder 480
ငါးဖမ်းစက်တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည်ငါးဖမ်းခြင်းအတွက်အောင်မြင်ရန်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းသင်သိပြီးဖြစ်သည်, သို့သော်လင်းယုန်ငှက်တစ်ကောင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည် ပို၍ ပင်ကောင်းသည်. Eagle SeaFinder 480DF သည်သင်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သောငါးရှာဖွေသူများအနက်မှတစ်ခုသာဖြစ်သည်. ၎င်းသည်သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုအတော်လေးရှုပ်ထွေးစေပြီး၎င်းကိရိယာများမှတစ်ခုမပါဘဲသင်အဘယ်ကြောင့်ငါးဖမ်းခဲ့သည်ကိုစဉ်းစားမိစေနိုင်သည်! ဤတွင် SeaFinder ပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်အင်္ဂါရပ်များဖြစ်ကြသည်. ပထမ, မျက်နှာပြင်; မျက်နှာပြင်သည် ၅ လက်မအကျယ်ရှိသော LCD မျက်နှာပြင်ဖြစ်ပြီး high definition resolution ဖြစ်သည်. ဤသည်အလွန်ကြီးစွာသောရုပ်ပုံလွှာပေးသည်. ၎င်းသည်ရေမျက်နှာပြင်အောက်ရှိရှင်းလင်းပြတ်သားသောရုပ်ပုံလွှာကိုသင့်အားမြင်စေသည်. ပြီးတော့, နှင့် 16 မီးခိုးရောင်အဆင့်, သင်ထိုရေအောက်တွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်အမျိုးမျိုးသောအရာတို့ကိုအကောင်းတစ် ဦး ဂုဏ်ထူးရပါလိမ့်မယ်. ဤအရာအားလုံးသည်အောက်ခြေကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်သင်၏ငါးများကိုရှာဖွေရန်ကူညီသည်. ထိုပြသမှုကိုပြုလုပ်ရန်သင့်အားငါးရှာရန်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကိုပေးပါ, ဘုတ်ပေါ်ရှိ sonar သည်အရည်အသွေးမြင့်မားရမည်. ဤသည် sonar နိုင်စွမ်းသင်ရှာတွေ့လိမ့်မည်အရာ 1500 အတိမ်အနက်နှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၏ခြေ, ငါးထောက်လှမ်းရေးဆော့ဝဲ. ၎င်းတွင် FishReveal ကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များရှိပြီးသင့်အားပင်လယ်ကြမ်းပြင်ပြိုကျမှုတွင်ပုန်းအောင်းနေသောငါးများနှင့်အောက်ခြေ၏လက်တွေ့ကျသောသက်ရှိထင်ရှားနှင့်မရောထွေးသောရုပ်ပုံများကိုပြသသည်။. ဤဒြပ်စင်များကသင့်ငါးကိုပစ်မှတ်ထားရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်ခွင့်ပြုသည်. သငျသညျသူတို့ရှိရာသင်၏ငါးစာချပစ်နှင့်အခါတိုင်းသူတို့ကိုလှည့်နိုင်ပါတယ်. Eagle SeaFinder တွင်သင်သည်အခြားစွမ်းဆောင်ချက်များလည်းရှိသည်. သင်၏လှေသည်အရှိန်မြင့်စွာရွက်လွှင့်နေသည့်တိုင်သင်၏ငါးကိုသင်ရှာနိုင်သည်. သင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအံ့သြဖွယ်ဖြစ်သော GRAYLINE ရတယ်. ငါးသည်အောက်ခြေ (သို့) ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ငါးသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုသိရှိရန်သင့်အားကူညီသည်. ဆိုလိုသည်မှာ, သငျသညျဆင်းရှိရုံတစ်ခုအရာဝတ္ထုကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်, ငါးမျှားကိုချ၏. အလုံးစုံ, လင်းယုန် SeaFinder 480 သင်၏ငါးများအားအချိန်တိုင်းသင့်အိမ်သို့ယူဆောင်လာမည့်ကိရိယာများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်. ပြီးတော့, သင်ရေများကျသည့်အခါတိုင်းသင်၏သူငယ်ချင်းများကိုအအေးခံ။ အထင်ကြီးစေပါသည်. သင်၏ငါးများကိုပစ်မှတ်ထားပြီးသိမ်းထားပါ – လင်းယုန် SeaFinder 480
Getting involved in online poker games isawonderful way of enabling you to playagreat card game in the privacy of your own home. There are so many tremendous advantages to playing these poker games via the internet. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, it is convenient in that you do not have to drivealong distance or even short distance toagaming facility as you will most likely only need to walk into the other room where your computer is set up. A second reason why online poker games areagreat way to enjoy your card games is that the stakes may sometimes beabit lower than if you were to proceed to gamble ataphysical establishment. A third advantage of playing poker games online is that concentration is more readily available as you are not playing poker inadistracting atmosphere where other players are sitting to the left and right of you in sometimes overly close quarters. A fourth and important advantage to playing poker online is that you can play this fun game 24 တစ်ရက်နာရီ,7daysaweek without ever having to leave the comfort of your own home. နောက်ဆုံး, as gaming tables at casino establishments can sometimes be largely filled up, by playing online poker you will ultimately eliminate the wait that often exists at gaming tables in casinos. Convenience for the seasoned or beginner poker player is one of the many advantages of playing online poker. Even though gaming institutions are popping up in more and more places these days, it is still likely that you will have to driveagood distance to reachacasino. Asanumber of casinos will usually have ample parking, there will still be those instances where you will have to look around for awhile foraparking spot and sometimes even pay for your parking while you are inside the casino. By playing poker online at home you are able to completely disregard the notion of driving anywhere at all and can use your time more wisely as opposed to wasting it by driving to and from the gaming facility. Another plus with not having to drive toagaming establishment is that you will save money on gasoline. Online poker is definitely for the convenience-lover. Lower stakes in the poker game are also an advantage of playing poker in an online setting. As individuals that play poker online are often beginners and are trying to learn the ins and outs of the game, low stakes poker games online make this type of table gameagreat place in which to learn without losing large amounts of money. In order to find the websites offering low stakes poker online, simply doageneral search usingaphrase such as ‘low stakes poker online’ or ‘poker games online low stakes’ and you will be met withanumber of poker websites from which to choose the one you like best. Just be sure to thoroughly review the site prior to playing for safety reasons to make sure it is legitimate. A third advantage of playing the game of poker online is that concentration will be more focused and centered in the comfort of your own home. Sometimes when you are playing poker table games atacasino, or any type of table games for that matter, other players can be distracting and almost intrusive. With online poker, you are able to concentrate better thereby increasing your chances of winning. When people are unable to concentrate, they tend to make silly moves thereby losing more money than they might have had they been able to concentrate. Playing poker online enables you to be able to concentrate on the game at hand and eliminates any outside distractions that may be present withinacasino setting. Having the availability of playing online poker 24 တစ်ရက်နာရီ,7daysaweek is another wonderful advantage of playingapoker game in this manner. This is wonderful for the individual who likes to wait until later at night when the house is quiet and work is done for the day when he/she can sit down in front of the computer and enjoyagame or two of online poker. It doesn’t matter what time of day it is as you are sure to find an online poker game in progress. Availability isabeneficial advantage to the poker game lover. နောက်ဆုံးတော့, playing online poker isagreat way to ensure your place atavirtual gaming table. How many times have you driven to your local casino, or in some instances not so local casino, and found that you had to wait an unimaginable amount of time to secureaspot atacard table that was within your budget? My guess is quiteafew of you have experienced this type of waiting game. By utilizing the availability of online poker websites you will be able to findaplace at one of their virtual tables and no longer will you need to wait in line to enjoy some poker action. This may also help you to relax as sometimes waiting in lines can cause unnecessary anxiety and aggravation. These are justafew reasons why playing poker online isagreat alternative to playing this game atacasino in your area. Not only is online poker convenient but it also allows you to concentrate on your game and increase your winnings. ထို့အပြင်, it allows you to play this entertaining game for lower sums of money, thereby limiting any potential extreme losses. ဒါ့အပြင်, you will never have to wait inasmoky, crowded casino area again looking foratable spot to open up. After hearing about all of the aforementioned reasons, why not give online pokeratry and see for yourself all of the wonderful things that it has to offer. Chances are you will not be disappointed. Advantages Of Playing Online Poker
Matt Hasselbeck 1998 မူကြမ်းနေ့ရွေး
Matt Hasselbeck was born on September 25, 1975 in Westwood, မက်ဆာချူးဆက်. At6ခြေထောက်4လက်မနှင့်အလေးချိန် 220 အလေးချိန်ပေါင်, Hasselbeck is the perfect size foratop notch NFL quarterback. To go along with his size, he also has one of the smartest minds when it comes to quarterbacks. When you combine these two things it is easy to see why Hasselbeck has become one of the top players in the league. But although he is achievingahigh level of success right now, things were not always this easy for him. Afterasuccessful career at Xaverian Brothers High School, Hasselbeck decided to take his game to Boston College. While at Boston College he hadagood career, but nothing that blew NFL scouts away. But all along Hasselbeck was working harder than ever before to get ready for the next level. ထဲမှာ 1998 NFL Draft the Green Bay Packers drafted Hasselbeck in the sixth round. Even though 186 other players were chosen before him, Hasselbeck was simply happy to getachance to compete in the NFL. In 2001 Hasselbeck got his big break when the Packers traded him to the Seattle Seahawks. During his time with the Seahawks he has set many individual records, and has also led the team back to the top of the NFC. In 2003, Hasselbeck became the teams all time highest rated passer. For his career Hasselbeck has completed 1,342 passes for nearly 16,000 ကိုက်. This is in addition to 96 မင်္ဂလာပါ, and only 57 ကြားဖြတ်. He is currently in the top 10 for the best all time passer rating in the NFL. Matt Hasselbeck has hadatough road to NFL stardom, and now that he is there he is showing everybody what they passed up along the way. It is safe to say that when Hasselbeck’s career is over that he will be remembered as one of the best quarterbacks of his time. Matt Hasselbeck 1998 မူကြမ်းနေ့ရွေး
Humminbird Fishfinder 565: သင်ရေကန်သို့ ဦး တည်တိုင်းအချိန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်, မြစ်, ဒါမှမဟုတ်သမုဒ္ဒရာ
အဆိုပါ Humminbird Fishfinder 565 များစွာသောကမ်းလှမ်း, ရေကန်ပေါ်သို့သင်သွားတိုင်းအချိန်တိုအတွင်းငါးများရှာဖွေရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရည်အသွေးမြင့်အင်္ဂါရပ်များ, မြစ်, ဒါမှမဟုတ်သမုဒ္ဒရာတောင်မှ! အကောင်းဆုံးငါးကိုရှာဖွေရန်အလေးအနက်ထားသောမည်သည့်တံငါသည်မဆိုဤကဲ့သို့သောငါးဖမ်းစက်တစ်မျိုးလိုအပ်သည်. ၎င်းကမ်းလှမ်းသောအင်္ဂါရပ်များကိုရိုးရှင်းစွာစဉ်းစားပါ. ရဲ့သူတို့ကိုကြည့်ကြပါစို့. The Fishfinder 565 အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ရှိသည်, 240240H ငါးလက်မဖန်သားပြင်အားဖြင့် V ကို. အကြီးအသံ, ဒါပေမယ့်တကယ်ကဘာလုပ်သလဲ? ဤသည်မြင့်မားသော definition မျက်နှာပြင်ဟာအလွန်ကောင်းသောရုပ်ပုံကိုခွင့်ပြုပါတယ်. တကယ်တော့, အဆိုပါမီးခိုးရောင်စကေးအလွန်တိကျသည်နှင့်သင်အရောင်လက်လွတ်မည်မဟုတ်ပါ. ၎င်းသည်မြင်ကွင်းကြီးကြီးဖြစ်သည့်အတွက်လွယ်ကူစွာကြည့်ရှုရန်ကောင်းမွန်သောအရွယ်အစားရှိသောရုပ်ပုံကိုရရှိသည်. ဒါပေမယ့်, ဘာလုပ်လဲ 565 ဒီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာထား? The 20 ဒီဂရီတစ်ခုတည်းရောင်ခြည် sonar လွှမ်းခြုံခြင်းနှင့်တိကျအောက်ခြေအသေးစိတ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်. sonar ၏ဤငွေပမာဏနှင့်အတူ, သင်ရှာဖွေနေသည့်တည်ဆောက်ပုံဖြစ်စေ၊ ငါးသည်ဖြစ်စေအောက်တွင်ဖုံးကွယ်နေသည့်အရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သည်. ပြီးတော့, သင်သည်သင်၏လှေအောက်တွင်သာမက၎င်းဘေးနှင့်ပတ်သတ်သောနေရာတွင်သာတွေ့မြင်နိုင်သည်. ဤသည်ကသင့်အားသင်လိုချင်သောငါးကိုတွေ့မြင်ရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းများပေးသည်. ကကမ်းလှမ်းသည်အခြား features တွေ 565 Sonar Echo Enhancement ပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ jig ကိုမြင်လိမ့်မည် 40 ပေငါးမျှားကသင့်အားငါးကိုဆွဲဆောင်လာသည်ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်သည်! ငါးကြီးများနှင့်ကပ်နေသည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ! ၎င်းသည်အတွင်းရှိသီးခြားပစ်မှတ်များကိုလည်းခွင့်ပြုသည်2တိကျလက်မ. အရာအားလုံးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပေးနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံး. သင့်ရဲ့ Fishfinder ရွေ့လျားစေရန် 565 ရွှေ့ပြောင်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်, သငျသညျစောင်းရ & ဆုံလည်လျင်မြန်စွာဆက်သွယ်မှုဖြုတ်တပ်ဆင်ခြင်းစနစ်. ဒီစနစ်ထဲမှာ, သင်တစ်နေရာမှတစ်နေရာရွှေ့ရန်ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံသာလိုသည်, ကေဘယ်ကြိုးတွေနဲ့မပတ်သက်ဘူး. ဤထက်များစွာသောပိုပြီး features တွေအတူ, အဆိုပါ Fishfinder 565 မည်သည့်ငါးကိုနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်သည်. သငျသညျအဆုံးစွန်ငါးဖမ်းခရီးစဉ်ကိုခံစားပါလိမ့်မယ်, သင်လိုချင်သောငါးကိုရှာပါ. Humminbird Fishfinder 565: သင်ရေကန်သို့ ဦး တည်တိုင်းအချိန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်, မြစ်, ဒါမှမဟုတ်သမုဒ္ဒရာ
The Eagle Sea Finder 320DF isafish finder that combines many of the features that you are looking for. It will help you to bring homeafull bucket of fish every time you head out onto the lake. The features of this product speak for themselves so let’s get to them. We’ll start with the 320 DF’s LCD display. While it is only five inches, it is still one of the best around on this type of fish finder. It also features 16 level grayscale နှင့် backlit screen နှင့် keypad. All this spells out that you haveahigh quality screen that you’ll be able to see details on. The fact that the blacks and whites are so well pronounced will help you determine the object you are looking at with clarity. This is important for distinguishing betweenastructure, အောက်ခြေ, andafish. The backlit feature will allow you to use your fish finder in any light including that of the early morning or late night. This means you can use it when you want to! The sonar on board the Sea Finder 320DF is pretty good as well! ဒါဟာတစ် ဦး အနက်စွမ်းရည်ရှိပါတယ် 1500 feet with lots of power. ပြီးတော့, it deliversahigh performance result, even while traveling at speeds of up to 70 တစ်နာရီမိုင်. It will help you expose fish targets that are hidden under surface clutter. You can separate fish from structures and the bottom. ပြီးတော့, you can use Fish ID to show underwater targets in different sizes of fish symbols. There are many more capabilities in this type of sonar, but it all comes down to the simple fact that the 320DF is able to provide you withaclear picture of not only what is below the surface, but what its doing and what type of fish it is. It will even find the fish for you. မြင်ယောင်ကြည့်ပါ. All you need to do is sit back and cast. The Eagle Sea Finder 320DF is capable of helping you get just what you want from the sea! Eagle Sea Finder 320 – Helping You Get What You Want From The Sea